(၃) နှစ်မြောက် ဖိုရမ်နှစ်ပတ်လည်စာစောင် ထုတ်ဝေရေးအစီအစဉ် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ကြော်ငြာချက်များ > အသိပေးချက်များ > (၃) နှစ်မြောက် ဖိုရမ်နှစ်ပတ်လည်စာစောင် ထုတ်ဝေရေးအစီအစဉ်
View Full Version : (၃) နှစ်မြောက် ဖိုရမ်နှစ်ပတ်လည်စာစောင် ထုတ်ဝေရေးအစီအစဉ်
၂၀၁၁ မေ လ (၁) ရက်နေ့ဆိုရင် ဖြင့် MEF လေးဟာ (၃) နှစ်သားလေး ဖြစ်လာတော့ပါမယ်။
အဲ့ဒီအတွက် (၃) နှစ်မြောက် ဖိုရမ်နှစ်ပတ်လည်အစီအစဉ်လေးများကို ခုထဲက ကြိုတင် စဉ်းစား အကောင်အထည်ဖော်ကြဖို့အတွက် ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေး အကြံပြုပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။
အရင်လိုဘဲ နှစ်ပတ်လည် ဂျာနယ်ဘဲ လုပ်ကြမှာလား (သို့) အခြားစိတ်ကူးရှိသည်များ ကို ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးကြပါအုံးဗျာ။
အတည်ပြုထားတဲ့ကဏ္ဍများကို အသေးစိတ် အစီအစဉ်ထပ်ခွဲခြင်း
ကဏ္ဍအလိုက် မိမိတို့ယူနိုင်သည့် တာဝန်များ ခွဲဝေခြင်း
စသည်ဖြင့် ....... တဆင့်ပြီး တဆင့် ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေး အကောင်အထည်ဖော်ကြဖို့ လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ် ပါရစေ ...
နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း လုပ်နေကြအတိုင်း နှစ်ပတ်လည် ဂျာနယ်လေးကိုတော့ လုပ်စေချင်ပါတယ်...။ မနှစ်ကလို အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် နောက်ကျသွားတာမျိုး မဖြစ်အောင် အစီအစဉ်လေးတွေ စနစ်တကျဆွဲဖို့ ကြိုးစားကြရအောင်နော်...။
နှစ်ပတ်လည် ဂျာနယ်မှာ ပါဝင်မယ့် ကဏ္ဍလေးတွေကတော့ မနှစ်တုန်းက ကိုရာမည ဆွေးနွေးခဲ့တာလေးကိုပဲ ပြန်ကိုးကားလိုက်ပါတယ်..။
၂။ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အသိပေးစကား
၃။ အဖွင့်စကား ဥယျောဇဉ်
အင်ဂျင်နီယာကဏ္ဍ (Civil, Archi, Mechnical , EP, EC, Metal, Marine, etc ... စတဲ့ ဘာသာရပ်များနဲ့ အကျုံးဝင်တဲ့ဆောင်းပါးများ)
နည်းပညာကဏ္ဍ (ကွန်ပျူတာ၊ သိပ္ပံပညာ၊ Acadamic စတဲ့ ဘာသာရပ်များနဲ့ အကျုံးဝင်တဲ့ ဆောင်းပါးများ)
အသိပညာပေးကဏ္ဍ (Management, Experience sharing, News စတဲ့ ဆောင်းပါးများ)
၉။ ဖိုရမ် လှုပ်ရှားမှု
၁၀။ ၀တ္ထုတို/ရှည် - အစရှိတာတွေကတော့ ထည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်...။
ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အသိပေးစကားကတော့ ကိုရာမည ရေးခဲ့သလိုပေါ့. >>> မြန်မာ့ပညာရေးလောကအတွက် တစ်ဘက်တစ်လမ်းကအထောက်အကူဖြစ်စေရန်နဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများနှင့် ပက်သက်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ရယ်၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအယူအဆများအကြား အထင်အမြင် လွဲမှား စေနိုင်သည့် ရေးသား ဆွေးနွေးမှုများကို လုံးဝ မပြုလုပ်ပါကြောင်းလည်း စသဖြင့်ပေါ့။ <<<
အဖွင့်စကားနဲ့ ဥယျောဇဉ် ကိုတော့ ကိုရေခါး၊ ကိုချစ်သီး နဲ့ ကိုရာမည သုံးယောက်လုံးကို တစ်မျိုးစီ ရေးစေချင်ပါတယ်...။ တစ်နည်းအားဖြင့် MEF သုံးနှစ်ပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်ရယ်.. MEF ရဲ့ အချိန်တစ်ခုမှာ အတူတူ ရှိခဲ့တဲ့ သုံးယောက်အတွက် အမှတ်တရ တစ်ခု ဖြစ်စေချင်တာရယ်ကြောင့်ပါ..။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ သမိုင်းလည်း ဖြစ်သလို MEF ရဲ့ သမိုင်းလည်း ဖြစ်တယ် မဟုတ်လားနော်...။
ကဗျာနဲ့ ကာတွန်း ကိုတော့ ကိုရာမည မနှစ်က အကြံပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ စဉ်းစားမိပါတယ်..။
>>> ကဗျာ - စိတ်ကြိုက် အကြောင်းအရာ၊ စိတ်ကြိုက်ရေးထုံး နဲ့ ဖွဲ့ဆိုနိုင်ပါတယ်၊ အများဆုံး စာလုံးရေ ၁၅၀၀၀ အထိခွင့်ပြုထားပါတယ်၊
>>> ကာတွန်း - တစ်ကွက်ကာတွန်းဖြစ်စေ၊ ၄ကွက်တစ်ပုဒ် ကာတွန်းဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်၊ ကြိုက်ရာအကြောင်းအရာ ကို သရော်ခွင့်ရှိပေမယ့် ဖိုရမ် ကိုအခြေပြုထားတဲ့ ဟာသမျိုးကိုဦးစားပေးပါမယ် (ဖိုရမ် က Board တိုင်းမှာရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတိုင်းကို ဟာသထုတ်ခွင့်ရှိပါတယ်) လက်နဲ့ဆွဲပြီး scan ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ computer အကူအညီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆွဲခွင့်ရှိပါတယ်။
ဆောင်းပါး ကဏ္ဍ မှာဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ရင် စာရေးသူ အနေနဲ့ မည်သည့်နေရာက ကိုးကားတယ်ဆိုတဲ့ Reference ပိုင်းလေးကို ထည့်စေချင်ပါတယ်..။ အရင်နှစ်တွေက ကျွန်တော်တို့ မထည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဖူး..။ ဒီလို အကြံပြုတယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ဟာ Professional စာရေးသူတွေ မဟုတ်သလို Prolife တစ်ခုမှာ ရပ်တည်နေတဲ့သူတွေ အများစု မဟုတ်ကြပါဖူး..။ လေ့လာတယ်.. မျှဝေတယ်.. ထပ်လေ့လာတယ်ဆိုတဲ့သူတွေပါ..။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ ရေးသားခဲ့တဲ့စာတွေမှာ တစ်စုံတစ်ရာသော တွေးခေါ်ဆန်းစစ်မှုများ မှားသွားခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြောင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ Publish လုပ်စဉ်မှာ တစ်စုံတစ်ရာ အမှားပါသွားခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုထို စာတွေကို ဖတ်ရှုတဲ့သူတွေအတွက် ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့နဲ့ ထပ်မံ လေ့လာလိုသူတွေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေဖို့ Refereece လေးကို ထည့်စေချင်တာပါ...။
ရသ ပိုင်းကတော့ မတူဖူးပေါ့နော်...။ ဒါကတော့ ချွင်းချက် :)
ဒါတွေက ပထမနှစ်နဲ့ ဒုတိယနှစ် ဂျာနယ်အပေါ်မှာ ကိုးကားပြီး ပြန်တင်ပြပေးတာပါ..။ တခြား လိုအပ်တာတွေကို ဖြည့်စွက် edit လုပ်ကြပါဦး...။ ဘာတွေ ထည့်မယ်၊ ဘယ်လို ထည့်မယ် ဆိုတာကို Planning လုပ်ပြီးမှ ဘယ်လို စလုပ်မယ်၊ ဘယ်လို တာဝန်ခွဲမယ်ဆိုတာတွေကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်...။
အဖွင့်စကားနဲ့ ဥယျောဇဉ် ကိုတော့ ကိုရေခါး၊ ကိုချစ်သီး နဲ့ ကိုရာမည သုံးယောက်လုံးကို တစ်မျိုးစီ ရေးစေချင်ပါတယ်...။ တစ်နည်းအားဖြင့် MEF သုံးနှစ်ပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်ရယ်.. MEF ရဲ့ အချိန်တစ်ခုမှာ အတူတူ ရှိခဲ့တဲ့ သုံးယောက်အတွက် အမှတ်တရ တစ်ခု ဖြစ်စေချင်တာရယ်ကြောင့်ပါ..။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ သမိုင်းလည်း ဖြစ်သလို MEF ရဲ့ သမိုင်းလည်း ဖြစ်တယ် မဟုတ်လားနော်...။
အွန်လိုင်းမှာ ညီလေးရာမညကို တွေ့မိလိုက်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူအတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားကြည့်ပါ့မယ်လို့ ပြောသွားပါကြောင်း .............
ကိုရေခါးကိုတော့ မပြောရသေးဘူး ........
မိုးအိမ် နဲ့ ကိုချစ်သီးရေ ... ဥယျောဇဉ် ဆိုတာ တယောက်တည်းကပဲ ရေးလေ့ရှိပါတယ် ... အများကြီး ဝိုင်းရေးရင် လူပြောစရာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ... အဲဒီတော့ သုံးယောက်စလုံး ရေးစေချင်တယ် ဆိုရင်
ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ အသိပေးစကားကို တယောက်၊ အဖွင့်စကားကိုတယောက်၊ ဥယျောဇဉ်ကို တယောက် ခွဲရေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ... (ဥယျောဇဉ် ဆိုတာ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့စကားလို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်)
နည်းပညာဆိုင်ရာဆောင်းပါး ဆိုရင်တော့ Reference က ထည့်ကို ထည့်ရပါလိမ့်မယ် ... အတွေးအမြင်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးဆိုရင်တော့ ထည့်ဖို့ လိုချင်မှ လိုပါလိမ့်မယ် ...
Essay ရေးချင်သူတွေအတွက် Essay ကဏ္ဍထည့်ပေးရင် ပိုသင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ် ... ရေးတဲ့လူမရှိရင်တော့ ဖြုတ်လိုက်ပေါ့ ...
ကျန်တာတော့ အထွေအထူး ပြောစရာမရှိပါဘူး
ဖိုရမ် ၃ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အစီအစဉ်အတွက်
MEF မန်ဘာအားလုံးပါ ဆွေးနွေးပါဝင်နိုင်အောင်လို့ .... ဒီနေရာလေးကိုရွှေ့ပြီး အသိပေးလိုက်ပါတယ် ။
အနည်းဆုံးတော့ နှစ်ပတ်လည်ဂျာနယ်လေးလုပ်ဖို့အတွက် ... လုံလောက်တဲ့လူအင်အားရှိမရှိလဲ သိရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ဆန်ဒရှိမရှိ နဲ့ ဘယ်သူက ဘယ်လို တထောင့် တနေရာကနေ ပါကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုတာလေး တယောက်တခွန်း ပြောပေးသွားကြပါအုံး ။
စာစောင် မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်း ၊ အတွင်းဒီဇိုင်း ၊ စာစီစာရိုက် ၊ သတ်ပုံစစ် ကစလို့ လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေမှာပါ။
နှစ်ပတ်လည်ဂျာနယ်လုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက် အားလုံးလဲသဘောတူ လုပ်ချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ ...
ကဗျာ ၊ ကာတွန်း ၊ ၀တ်ထုတို / ရှည် ... တွေကလွဲရင်
နည်းပညာဆောင်းပါးတွေအတွက် ... အသစ်ရေးကြမယ့် စာမူတွေအပြင်
သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် ပို့စ်တွေအနေနဲ့ကတော့ ဖိုရမ်ထဲက ကောင်းတာလေးတွေကိုလဲ ဖြတ်ညှပ်ကပ် ယူလို့ရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် နားလည်တဲ့ အကူအညီပေးမယ့် သူများ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆောရီး ကျနော် .. နည်းနည်း နောက်ကျသွားတယ် ..။ :frusty:
ဒီနှစ်ဂျာနယ်ကို ကျနော် ပြန်ကိုင်ပေးပါ့မယ်။ :frusty:
မနှစ်က အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် ဆောရီးပါဗျာ..။ :frusty:
ဒါပေမယ့် မနှစ်က အတွေ့အကြုံအရတော့ ကျနော် တစ်ယောက်တည်း ကိုင်လို့ မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ :peace:
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် .. စာမူပို့ပေးတာကို ကန့်သတ်တဲ့အနေနဲ့ Font အမျိုးအစားနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်အမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ (မနှစ်က အခက်အခဲတွေ အရပါ။)
မှတ်ချက် ..။ ပြန်လုပ်ခွင့်ရရင် မနှစ်က အကြွေးကို ပြန်ဆပ်ပေးချင်ပါတယ်။ ကိုလင်းထင်ကြီးကိုလဲ တွေ့တဲ့နေရာမှာ ၀ိုင်းဆွဲပေးကြပါဦး။
မှတ်ချက် ..။ ပြန်လုပ်ခွင့်ရရင် မနှစ်က အကြွေးကို ပြန်ဆပ်ပေးချင်ပါတယ်။ ကိုလင်းထင်ကြီးကိုလဲ တွေ့တဲ့နေရာမှာ ၀ိုင်းဆွဲပေးကြပါဦး။
မဂ္ဂဇင်း စောစောလေးဖတ်ရအောင် (အစ်ကိုတို့ကို) အားကိုးပါတယ်နော့။
(အစ်ကိုတို့သာမက မမများကိုလည်း တူတူပဲ အားကိုးပါတယ် အဟုတ်တစ်ကယ်)
၃ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဂျာနယ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေးပါ၊၊ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျား....၊၊လိုအပ်တဲ့ အကူအညီများရှိရင်လည်း ပြောပါ၊၊
ကျွန်တော်လည်း ဂျာနယ်ဖြစ်မြောက်ရေးမှာ တစ်တပ်တစ်အားကူညီချင်ပါတယ်.... အိမ်ပြန်သယ်ပြီးလုပ်လို့ရတဲ့ အလုပ်မျိုးဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေမှာပါ.... ဒီဇိုင်းပိုင်းတော့ မရပါဘူး..... စာစီစာရိုက်တို့ သတ်ပုံစစ်တာတို့ဆိုရင်တော့ လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်.... တခြားတောက်တိုမယ်ရလေးတွေလည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်... ပေးစရာအလုပ်ရှိရင် အားမနာတမ်း တာဝန်ပေးလို့ရပါတယ်.... အရင်ဂျာနယ်တွေတုန်းကလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကူညီဖို့အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး.... အခက်အခဲကတော့ online မှာ ရှိတဲ့အချိန်နည်းတာပါပဲ.... ကျန်တာကတော့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ထဲကပေးလို့ရပါတယ်..... ဆက်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်တွေချပြီးသွားရင် ကျွန်တော်လုပ်နိုင်မှာကို ယူလုပ်ပေးပါ့မယ်.....
မနှစ်ကအတိုင်းဆိုရင် .. စာမူတွေ ရေးသားပြီးပို့လာတဲ့ စာမူမူရင်းတွေကို Win .. Innwa နဲ့ ပြန်ရိုက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
မနှစ်က ဂျာနယ်နောက်ကျရတာလဲ အဲဒီပြဿနာကြောင့်ပါ။
အကိုရာမည လုပ်ထားတဲ့ Zaw Gyi One To Win Innwa နဲ့ ပြောင်းလဲ အကုန်လုံးနီးပါး စာတွေ ပြန်စီရပါတယ်။
အုပ်ချုပ်သူတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လို စီစဉ်ထားလဲဆိုတာတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ဖြစ်နိုင်ရင် ကျနော်က အခုအချိန်တည်းက ကြိုပြီးတော့ စာမူတွေ တောင်းစေချင်ပါတယ်။
အဲဒါမှ ဂျာနယ်ထွက်ရက် ကွက်တိကျပါလိမ့်မယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဂျာနယ်လုပ်နေရင်းနဲ့ ဟိုလိုတာတွေ ဒီလိုတာတွေလည်း ရှိမှာစိုးလို့ပါ။
ဒီနှစ် ကျနော်ပြန်လုပ်ခွင့်ရရင် Adobe Indesign CS ကိုသုံးပါ့မယ်။
အောက်မှာ ၀ိုင်းဝန်းကူညီမယ့်လူတွေနဲ့ ပြန်လည်စာစစ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သူများအတွက် Mediafire နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆြာချစ်ခင်ဗျား .. ပါမစ်ပေးပါဦး .. လုပ်ရမှာလား မလုပ်ရဘူးလား ဆိုတာ .. :phone:
ပါမစ်က ပေးထားပြီးသားပါ ...
zawgyione နဲ့ဘဲလုပ်လို့မရဘူးလားဗျာ ၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲရှိလို့ဟင် Win... Innwa Font နဲ့သုံးဖို့လိုအပ်ပါလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ် ၊
လူတိုင်းနီးပါးသုံးနေတဲ့ Zawgyi one font နဲ့ပို့လာတဲ့ စာမူတွေကို ပြန်ပြီးစာပြန်ရိုက်နေရတာကိုက တကယ့် Major အလုပ်တခုကြီးအဖြစ် ဖြစ်လာမှာမို့ပါ။
နောက်ပြီး ...(ဖြစ်လာနိုင်တဲ့) နောက်ကျ စာမူတွေအတွက် အခက်အခဲအတော်ကြီးနိုင်ပါတယ်။
ဒီကိစ်စလေးကို အတွေ့အကြုံရှိ သိနားလည်သူများ လဲ ၀င်ရောက်အကြံပြုဆွေးနွေးပေးကြစေလိုပါတယ်။
စာမူကိစ်စ နဲ့ တာဝန်ခွဲဝေလျာထားမှုတွေအတွက် ကျနော်စဉ်းစားပြီး အမြန်ဆုံး ရေးလိုက်ပါ့မယ်။
လေပြေလေးရေ .... အခုလို တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့MEF ကိုယ်စားကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ကူညီမယ့်သူ အင်အားများလိုနေပါသည်။ အားလုံး မိမိတို့တတ်နိုင်တာလေးတွေကို ၀ိုင်းဆွေးနွေးပေးကြပါအုံးဗျာ။
ရပါတယ် ဆြာချစ် ..။ http://www.forumsextreme.com/images/aFu_SmileySalute.gif
Zaw Gyi နဲ့ပဲ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် (၀ တွေ ဈ) တွေ ကိစ္စကိုတော့ တော်တော်လေးရှင်းရမယ်နော်။ :kev:
စာမျက်နှာအရေအတွက် ကန့်သတ်တာတွေ ဘာတွေလုပ်ဦးမလား ..။
ကိုလင်းထင်ကြီးကို တော်တော်လေး အလိုရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ တွေ့မိတဲ့သူများ တွေ့တဲ့နေရာမှာ ၀ိုင်းဆွဲလာပေးကြပါ။ သူက ပျောက်သွားရင် ပေါ်မလာတတ်လို့ပါ။ ကူညီပါဦး ..။
ဟိန်းလေး လဲရှိတယ်နော် တောက်တိုမယ်ရလေးတွေခိုင်းလို့ရပါတယ်
ကိုထင်လင်းကြီးကို တွေ့ခဲ့ရင် ဘာကိုဆွဲခေါ်လာရမှာလည်းရှင်းအောင်ပြောပါ လေပြေရယ်။
မြန်မာမှုမှာ ဆွဲနည်းတွေက အမျိုးမျိုးရှိတာကိုး
လက်ဆွဲတာတို့ နားရွက်ဆွဲတာတို့ ဂုတ်ဆွဲခေါ်တာတို့ပြောတာပါနော် ချော်မတွေးနဲ့။
(ခင်မင်ရင်းနှီးစွာနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်အောင် နောက်တာကို တစ်လွဲတွေတွေးပြီးလဲ စိတ်မဆိုးကြဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။)
ဇော်ဂျီ နဲ့ပဲ လုပ်လိုက်တာ ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့ကလွဲပြီး တခြား Font တွေ လုံးဝမသုံးဖို့ ကြေညာပေးထားပါ။ ဝ နဲ့ ၀ က ဒီလောက်ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ MS Word မှာ Find & Replace function သုံးပြီး ပြောင်းပစ်လိုက်လို့ရပါတယ်။
အခုအချိန်ကစပြီး စာမူတွေ စခေါ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပိတ်ရက်လည်း သတ်မှတ်ရပါမယ်။ နောက်ပြီး အယ်ဒီတာအဖွဲ့ နဲ့ တခြားအဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ အဓိက က တာဝန်ခွဲဖို့ပါ။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်စာမူအမျိုးအစားကို တာဝန်ယူရွေးမလဲ၊ ဒီဇိုင်းဘယ်သူလုပ်မလဲ ... Format ဘယ်သူချမလဲ ... စသဖြင့်ပေါ့။ နောက်ပြီး စာမူရွေးတယ်ဆိုတာက ရွေးရုံသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး ... ရွေးပြီးသားကို တည်းဖြတ်ရပါမယ် ... စာလုံးပေါင်းစစ်ရပါမယ် ... ဝဏ္ဏဖြတ်ရပါမယ် ... ပြီးမှ အဲဒါတွေကို ဒီဇိုင်းနာဆီ ပို့ရပါမယ်။ ဒီဖိုင်းနာက ပုံတွေထည့်၊ စာပြန်စီ ... စတာတွေပြီးသွားရင် Final Proof ကို အယ်ဒီတာ အဖွဲ့က ပြန်ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပြင်သင့်တာ ပြန်ပြန်ရပါမယ်။ ပြီးမှ စာအုပ်ထွက်လာမှာပါ။
အဲဒီတော့ အခု ထွက်မယ့်ရက်ကို သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ အဲဒီပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကျန်တဲ့ task တွေ အတွက် target date တွေ ချရမှာပါ။ ကျနော် လောလောဆယ် WBS အကြမ်း အောက်မှာ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ တာဝန်ခွဲဝေခြင်း၊ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း၊ ကဏ္ဍအလိုက် ထည့်မည့် စာမူအရေအတွက် သတ်မှတ်ခြင်း၊ စာမူအတွက် စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း။ စာမူအရေအတွက် "ကန့်သတ်ခြင်း" (လူတယောက်ကို ကဏ္ဍတခုအတွက် စာမူ ၂-ပုဒ်ထက်ပိုပြီး မပို့သင့်ပါဘူး။ ရွေးတာက ကဏ္ဍတခုအတွက် အများဆုံး ၂-ပုဒ်ပဲ ရွေးသင့်ပါတယ်။ ဒါတောင် အင်မတန်ကောင်းမှပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် လူတယောက်ကို ကဏ္ဍတခုမှာ စာမူ ၁-ပုဒ်ပဲ ရွေးပါ)၊ စာမူပိတ်ရက်သတ်မှတ်ခြင်း
၃။ စာမူများ ရွေးခြယ်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း။
၄။ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ စာစီခြင်း၊ အချောသပ်ခြင်း
၅။ Final Proof ဖတ်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း
အဲဒါတွေ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ စာမူခေါ်ချိန်က တလလောက်တော့ အချိန်ပေးမှ ကောင်းတဲ့စာမူတွေရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ တလ လို့ သတ်မှတ်မယ်ဆိုပါစို့ ... ဒါဆိုရင် ရွေးဖို့နဲ့စာစီဖို့ အချိန် အတော်နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ စာမူတွေရတာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ယူထားတဲ့ အယ်ဒီတာတွေ စပြီး ရွေးခြယ်တည်းဖြတ်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် ဒီဇိုင်းလုပ်၊ စာစီဖို့က အနည်းဆုံး ၁၀-ရက်လောက် လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့အပေါ် မူတည်ပါတယ်။ Final Proof က စာအုပ်မထွက်ခင် အနည်းဆုံး ၃-ရက်လောက်တော့ ကြိုဖတ်မှ ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီတော့ စာအုပ်ထွက်ရက်ပေါ်မူတည်ပြီး schedule ဆွဲမှ ဖြစ်ပါမယ်။
သိပ်တော့ မလောပါနဲ့ ... MEF နှစ်ပတ်လည်နေ့ အမီ ထွက်ချင်တယ်ဆိုပြီး တွန်းလုပ်ရင် quality ပိုင်းက ကျသွားမှာ သေချာပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် မေလအတွင်း (မေလ လယ် ဒါမှမဟုတ် နောက်ဆုံးပတ်လောက်) ထွက်ဖို့ target ထားရင် သင့်တော်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကျနော် ခရီးသွားစရာ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ Final Proof ဖတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ခက်တာက အခုအချိန်မှာ ဘာမှ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ လိုအပ်ရင် ဝတ္ထုတို/ရှည်၊ ကဗျာ၊ အက်ဆေး၊ သုတ/ရသ ဆောင်းပါးတွေကိုတော့ ကျနော် ရွေးပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကလည်း လောလောဆယ်တော့ အာမ မခံနိုင်သေးလို့ပါ။ နည်းပညာဆောင်းပါးတွေကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ယူရွေးပေးကြပါ။
လာဘီဗျိုး .... ဘာတွေလုပ်ပေးရမတုန်း ....။
ဒီဇိုင်း + ကာတွန်း + သရုပ်ဖော် ... အတွက်ကျနော့်တာဝန်ထား..။ စာမူလေးတွေကို htinlin.10@gmail.com ဆီလက်ကမ်းပို့ ပေးထား။
03-19-2011, 10:19 AM
အဟဲ .. လာပြီ .. ။ အနော် သွားဆွဲလိုက်တာ .. (မိရာ)။ :peace:
ကိုယ်တွေက ညီအကိုတွေပဲ အကိုကြီးရာ မနှစ်ကလိုပဲ ဆက်လုပ်တာပေ့ါ .. ဖြစ်နိုင်ရင် ခွင့်တစ်လလောက် ယူထားဗျာ။ :peace: :tea:
အကိုကြီးလို့ခေါ်တာ အကောင်းမထင်နဲ့နော် (ငှဲငှဲ အကြံရှိတယ်) :loco::peace:
- စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ပါစေချင်တယ်။ ပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးခန်း၊ အမြင်လေးတွေဖလှယ်တဲ့ Work shop လေးလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ (ဒါလဲ မနှစ်တုန်းက ကျနော် (၃)ခါလောက်ကို အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး)
- ခေတ်တွေလဲပြောင်းလဲနေပြီဆိုတော့ကာ ... အရင်ကလို နိုင်ငံရေးဆိုတာနဲ့တီကောင်ဆားတို့ ခံရသလို တွန့် မသွားစေချင်ဘူး ....။ ကိုယ့်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ ကိစ္စလေးတွေ အခြေပြုပြီးရေးသားတာလေးတွေ လုပ်သင့်ကြပြီလို့ ထင်တယ်။ (အခုလဲ နိုင်ငံတွင်းတရားဝင် ဂျာနယ်တွေ၊မဂ္ဂဇင်းတွေမှာလဲ နိုင်ငံရေးရာတွေကို ဆွေးနွေးနေကြပါပြီ။ နိုင်ငံရေး ဆိုလိုက်တာနဲ့ လက်ရှိအစိုးရကို အတင်းအဖျင်း ဆန်ဆန်ပုတ်ခတ်တာမျိုး မယူဆစေချင်ပါ။) တခြားနိုင်ငံတွေက အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတွေရဲ့ ပညာရေးစနစ်လေးတွေအကြောင်းလဲ ရေးစေချင်တယ်။
- မနှစ်ကဂျာနယ်မှာ ရသ ပိုင်းနည်းနေတယ်။ English section မှာလဲစာမူနည်းတယ်။ ဒီနှစ် တော့ ပိုရေးပေးနိုင်ကြရင်ကောင်းမယ်။
- မေးလ်ကနေတဆင့် စာမူဖိတ်ခေါ်လိုက်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
- စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ပါစေချင်တယ်။ ပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးခန်း၊ အမြင်လေးတွေဖလှယ်တဲ့ Work shop လေးလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
- ခေတ်တွေလဲပြောင်းလဲနေပြီဆိုတော့ကာ ...
ကိုယ့်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ ကိစ္စလေးတွေ အခြေပြုပြီးရေးသားတာလေးတွေ လုပ်သင့်ကြပြီလို့ ထင်တယ်။
နိုင်ငံရေး ဆိုလိုက်တာနဲ့ လက်ရှိအစိုးရကို အတင်းအဖျင်း ဆန်ဆန်ပုတ်ခတ်တာမျိုး မယူဆစေချင်ပါ။
တခြားနိုင်ငံတွေက အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတွေရဲ့ ပညာရေးစနစ်လေးတွေအကြောင်းလဲ ရေးစေချင်တယ်။
အသစ်အသစ် ကျောင်းတက်လာမယ့် လူငယ်တွေအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးမှာကိုတော့ ၀မ်းသာအားရကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။
မောက္ခမှာ ရောက်သမျှ ဖတ်ကြည့်မိပြီး
ပညာရေးအတွက် သက်သက် ရေးထားတာမျိုးလေးတွေဆို နှစ်သက်ပါတယ်။
အဲဒါမျိုးလေးတွေ နမူနာယူပြီး ၀ိုင်းလုပ်နိုင်လျှင် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာ ... ရသ ပိုင်းများများ လေးထည့်စေချင်ပါတယ် ။ ကိုထင်လင်းပြောသလို စကားဝိုင်းကဏ္ဍလေး လဲကောင်းတယ်ဗျ ။
ကျနော်လဲ ကိုဟယ်ရီဆွေးနွေးပေးတာလေးတွေကို သဘောတူပါတယ်။
နှစ်ပတ်လည် စာစောင်အတွက် မေလ (၁) ရက်နေ့ ထွက်ရှိဖို့ထက် သိပ်ပြီးတော့လဲ Rush မဖြစ်ရလေအောင် Quality တခုအနေနဲ့လဲရရှိရအောင် ၊ လက်ရှိအခြေအနေအရ
နှစ်ပတ်လည်လ ဖြစ်တဲ့ မေလအတွင်းဘဲ ထွက်ရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားကြတာပေါ့။
မေလ နောက်ဆုံးပတ် (၂၉.၅.၂၀၁၁) တနင်္ဂနွေနေ့ ထုတ်ဝေနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ကြပါစို့။
စာမူပိတ်ရက်ကိုတော့ ကိုဟယ်ရီ အကြံပေးသည့်အတိုင်း နောက်ဆုံးအချောသတ်မထွက်ခင် ၁၀ရက်အလို (၁၉.၅.၂၀၁၁) နေ့လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
စာမူပို့ရမည့် အီမေး : adminct@myanmarengineer.org
ကိုထင်လင်းတင်ပြသလို စကားဝိုင်းလေးလဲ ပါနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
အပြုသဘောမျိုးဆွေးနွေးကြမယ့်စကားဝိုင်းထဲမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးနိုင်ကြမယ့်သူများကိုလဲ ဒီနေရာလေးကနေ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ကိုထင်လင်းတို့ မအေရာတို့ ဦးစီးပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆွေးနွေးကြမှာလဲ ဖိုရမ်ထဲမှာဘဲ ပို့စ်တင်ပြီး ၀ိုင်းဆွေးနွေးကြ ပြီးမှ ဖြတ်ညှပ်ကပ်ပြန်လုပ်မှာလား။
cy တို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ ရသပိုင်းပိုပါဝင်ဖို့အတွက်ကတော့ ပေးပို့တဲ့သူ များများ ရှိရင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး
အယ်ဒီတာအဖွဲ့ရဲ့ သဘောအတိုင်း အတတ်နိုင်ဆုံးများနိုင်သမျှ များများ ထည့်သွားကြတာမှာပါ။
ဖိုရမ်ထဲက ပို့စ်ကောင်းကောင်းတွေကိုလဲ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် တတ်သိနားလည်သူများအနေနဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ပြီး စာစောင်အတွက် တန်ဘိုးရှိတဲ့ စာမူတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲကြပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ ။
ဒီအပိုင်းကို တာဝန်ယူပေးနိုင်ကြမယ့် သူများကိုလဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
(၃) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အတွက် ယာယီ တာဝန်ခွဲဝေမှု
(အဆင်ပြေမပြေ ပြန်လည်ပြောပေးကြပါအုံး ၊ အဆင်ပြေကြတယ်ဆိုပါက အတည် တာဝန်ခွဲဝေမှု ဖြစ်ပါတယ်)
Electronic အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ - ကို William Paul ၊ မ အေရာ
စက်မှု ၊ ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ - ကိုထွန်း ၊ ကိုဟယ်ရီ ၊ ကိုလိပ်ကြီး ၊ ကိုဖိုးတာ
လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ - ကို zinmaung
မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ - ကိုထွန်းအောင်ကျော် ၊ ကို အင်ဒရူး ၊ ကို Pho Zaw ၊ chit tee ၊ chitsuelay
ဗိသုကာပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - ကိုပါကြီး ၊ မ KPZ ၊ မဂျွန်မိုးအိမ် ၊ MTZO
AutoCAD ပိုင်းဆိုင်ရာ - ကိုပါကြီး ၊ မ KPZ ၊ မဂျွန်မိုးအိမ် ၊ ကို chan09
Mining သတ္ထုတွင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ - ကို chan09 ၊ ငမောင်
နျူကလီးယား အင်ဂျင်နီယာပညာ - ကို Dragon Warrior ၊
ကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာများ - ကိုရေခါး ၊ သိုးကျောင်းသား ၊ ကို ချင်းတွင်းသား ၊
ဓါတ်ပုံပိုင်းဆိုင်ရာ - ကိုငယ် ၊ ကို phyo
ဝတ္ထုတို/ရှည်၊ ကဗျာ၊ အက်ဆေး၊ သုတ/ရသ ဆောင်းပါး - ကိုဟယ်ရီ ၊ မဂျွန်မိုးအိမ် ၊ ကိုပါကြီး
စာစောင် ဒီဇိုင်း - မောင်လေပြေလေး ၊ ကိုထင်လင်း ၊ ကိုနေ
ကူညီပေးချင်ကြတယ်လို့ဆိုကြပေမယ့် မည်သူက မည်သူတာဝန် ယူပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သေချာမသိပါသဖြင့် ....
ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လူအင်အားကတော့ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေပါသေးသည်။
မြန်မာပြည်က ဖိုရမ်မာတွေလဲ ၀င်ရောက် တာဝန်ယူနိုင်ကြတဲ့အပိုင်းလေးတွေကို ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပြောပေးကြပါအုံး။
တနှစ်မှ တခါ ထုတ်ဝေဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ နှစ်ပတ်လည်စာစောင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ......
လိုအပ်တာတွေ ၊ တခြား တာဝန်ယူနိုင်မယ့် သူများအနေနဲ့လဲ ကျနော်ပြောတဲ့အထဲမှာ မပါကြပေမယ့်လဲ ...
မိမိတို့ တာဝန်ယူပေးနိုင်ကြမယ့် အပိုင်းတွေကို .....
အားမနာတမ်း ၀င်ရောက်ပြောပြပေးကြဖို့ တာဝန်ယူပေးကြဖို့ လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ........။
(နီးစပ်ရာတာဝန်ယူပေးနိုင်သူများကိုလဲ နိုင်တဲ့သူများက ဆွဲခေါ်လာခဲ့ကြပါ:welcome: )
(မလေးရှားသို့ မိသားစုအလည်ခရီးသွားနေပါသဖြင့် စာပြန်နောက်ကျတဲ့အတွက်အားလုံးကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ)
မနှစ်က ညီလေးရာမည ရေးထားတဲ့ format ကိုဘဲ ကျောရိုးအနေနဲ့ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။
MEF (၃) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ဂျာနယ်အတွက် Format နှင့် စည်းကမ်းချက်များ
အင်ဂျင်နီယာကဏ္ဍ (Mech, Civil, Architect, EP, EC, Metal, Marine, etc ... စတဲ့ ဘာသာရပ်များနဲ့ အကျုံးဝင်တဲ့ဆောင်းပါးများ)
နည်းပညာကဏ္ဍ (ကွန်ပျူတာ၊ သိပ္ပံပညာ၊ သင်္ချာ၊ စတဲ့ ဘာသာရပ်များနဲ့ အကျုံးဝင်တဲ့ ဆောင်းပါးများ)
အသိပညာပေးကဏ္ဍ (Management, Experience sharing, news, useful websites &amp; blogs, ဘာသာရေး etc.. နယ်ပယ်နဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ ဆောင်းပါးများ)
7.Who is Who
နံပါတ် (၁) ကိုတော့ မောင်လေပြေလေးနဲ့ ကိုထင်လင်းတို့က တာဝန်ယူရမယ်ထင်တယ်နော်
နံပါတ် (၂) က ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အသိပေးစကားကတော့ မြန်မာ့ပညာရေးလောကအတွက် တစ်ဘက်တစ်လမ်းကအထောက်အကူဖြစ်စေရန်နဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများနှင့် ပက်သက်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ရယ်၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအယူအဆများအကြား အထင်အမြင် လွဲမှား စေနိုင်သည့် ရေးသား ဆွေးနွေးမှုများကို လုံးဝ မပြုလုပ်ပါကြောင်းလည်း စသဖြင့်ပေါ့။
နံပါတ် (၃) က အဖွင့်စကားပေါ့.. ဥယျောဇဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွက် ကိုဟယ်ရီရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ ။
နံပါတ် (၅) ကဗျာ - စိတ်ကြိုက် အကြောင်းအရာ၊ စိတ်ကြိုက်ရေးထုံး နဲ့ ဖွဲ့ဆိုနိုင်ပါတယ်၊ အများဆုံး စာလုံးရေ ၁၅၀၀၀ အထိခွင့်ပြုထားပါတယ်၊
နံပါတ် (၆) ကာတွန်း - တစ်ကွက်ကာတွန်းဖြစ်စေ၊ ၄ကွက်တစ်ပုဒ် ကာတွန်းဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်၊ ကြိုက်ရာအကြောင်းအရာ ကို သရော်ခွင့်ရှိပေမယ့် ဖိုရမ် ကိုအခြေပြုထားတဲ့ ဟာသမျိုးကိုဦးစားပေးပါမယ် (ဖိုရမ် က Board တိုင်းမှာရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတိုင်းကို ဟာသထုတ်ခွင့်ရှိပါတယ်) လက်နဲ့ဆွဲပြီး scan ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ computer အကူအညီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆွဲခွင့်ရှိပါတယ်၊
နံပါတ် (၇) ဖြစ်တဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာနဲ့ အင်ဂျင်နီယာပညာဆိုင်ရာ ကိုယ်တိုင်ရေး ဆောင်းပါးများဖြစ်ကြပါမယ်။
နံပါတ် (၈) ဖိုရမ်အလှူကတော့ စတင်ဖြစ်တည်လာပုံနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ ဝေေ၀ဆာဆာ ရေးသားတင်ပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ (ဒီနှစ်ထည့်ဖို့ရှိမရှိ မသိသေးပါ ၊ တကယ်လို့ မ KPZ ရန်ကုန်ပြန်ဖြစ်တယ် အလှူလဲလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ထည့်ကြတာပေါ့)
နံပါတ် (၉) MEF ကိုယ်စားပြုပြီး ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ Civil Engineering Seminar Singaporer 2010 ပွဲလေးအကြောင်း ကို ဓါတ်ပုံတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ ထည့်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
နံပါတ် (၁၀) အင်တာဗျူး အနေနဲ့ ဖိုရမ်ရည်ရွယ်ချက်ကို ပေါ်လွင်အောင်နဲ့ ဖိုရမ်စထောင်ခဲ့တဲ့ ကိုရေခါးကို ဗျူးရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ (အရင်နှစ်တွေကတော့ မထည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ၊ ဒီနှစ် ကိုရေခါးကို ဗျူးပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်) နေညို / ဟိန်းလေး တို့တတွေ တာဝန်ယူပေးနိုင်ကြရင်ကောင်းမယ်။
နံပါတ် ၁၁ ၀တ္ထုတို/ရှည်- စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာ ကိုအခြေတည် ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ခွင့်ရှိပါတယ်၊ အဖြစ်မှန်ကို ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ အမည်နာမ၊ နေရပ်များကို လွှဲရေးဖို့လိုပါတယ်၊
အဲ့အတွက် အပေါ်က ကဏ္ဍများအတိုင်းပဲ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့မှာလဲ ကဗျာ ၊ ကာတွန်း စသည်တို့ပါပါမယ်။
Eduledge ကတော့ ပညာပေးဆောင်းပါးများဖြစ်ပြီး ၊ Technoledge ကတော့ အင်ဂျင်နီယာ ၊ ကွန်ပျူတာပညာဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများဖြစ်ပါတယ်။
Essay အတွက် မိမိနှစ်သက်ရာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ ရေးသားတင်ပြနိုင်ပါတယ်။
Photo Section ကတော့ ရုပ်ငြိမ်နဲ့ဓါတ်ပုံကဏ္ဍအောက်ရှိဓါတ်ပုံများ ၊ ထပ်မံပေးပို့လားသော ဓါတ်ပုံများထဲမှာ ကောင်းနိုးရာရာများ။
Who is Who ကတော့ ကျွန်တော်အရင်ပြောထားသလိုပဲ ဂျာနယ်ပါစာရေးသူများရဲ့ အတ္ထုပတ္တိပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ပါမယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတဲ့ အကြမ်းဖျင်း plan ပဲဖြစ်ပါမယ်။ ဒီထဲက လိုပိုတွေကို ထပ်မံဖြည့်စွက်/ပယ်နှုတ်ဖို့ ရှိပါမယ်။
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ဂျာနယ်အတွက် စာမူပေးပို့ရာမှာ ပေးပို့ရေးသားရမဲ့ ပုံစံ
Font - Zawgyi-one
Font size - 10 ( For Header - 12)
File format - doc(or)docx (Microsoft Word File Format)
Margins - Top - 0.75&quot; , Bottom - 0.75 &quot;
Left - 0.5&quot; , Right - 0.5&quot;
Alignment - Justify
ဒါကတော့ စာမူပေးပို့လိုသော အသင်းသားများ ရေးသားလိုက်နာရမဲ့အကြမ်းဖျင်းပုံစံပါ။
ဂျာနယ်အတွက် စာမူပေးပို့ရာမှာ မိမိကိုယ်တိုင်ရေးသားသောစာမူများ ဖြစ်ရပါမယ်။ လုံးဝအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကို တာဝန်ယူရပါမယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဖိုရမ်မှာတင်ထားသော ပို့စ်များကိုလဲ စာမူအဖြစ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားဖို့တော့လိုပါမယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသောဝက်ဆိုက်များမှာ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးသော အကြောင်းအရာဖြစ်ရပါမယ်။
ဆောင်းပါး ကဏ္ဍ မှာဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ရင် စာရေးသူ အနေနဲ့ မည်သည့်နေရာက ကိုးကားတယ်ဆိုတဲ့ Reference ပိုင်းလေးကို ထည့်စေချင်ပါတယ်..။ အရင်နှစ်တွေက ကျွန်တော်တို့ မထည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဖူး..။ ဒီလို အကြံပြုတယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ဟာ Professional စာရေးသူတွေ မဟုတ်သလို Prolife တစ်ခုမှာ ရပ်တည်နေတဲ့သူတွေ အများစု မဟုတ်ကြပါဖူး..။ လေ့လာတယ်.. မျှဝေတယ်.. ထပ်လေ့လာတယ်ဆိုတဲ့သူတွေပါ..။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ ရေးသားခဲ့တဲ့စာတွေမှာ တစ်စုံတစ်ရာသော တွေးခေါ်ဆန်းစစ်မှုများ မှားသွားခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြောင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ Publish လုပ်စဉ်မှာ တစ်စုံတစ်ရာ အမှားပါသွားခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုထို စာတွေကို ဖတ်ရှုတဲ့သူတွေအတွက် ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့နဲ့ ထပ်မံ လေ့လာလိုသူတွေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေဖို့ Refereece လေးကို ထည့်စေချင်တာပါ...
၀တ္ထုတိုအနေနဲ့ အနည်းဆုံးစာမျက်နှာ ၄ မျက်နှာခန့်ရှိရမယ်ဖြစ်ပြီး ၊ ၀တ္ထုရှည်အတွက် အနည်းဆုံး ၁၀ မျက်နှာခန့်ရှိရပါမယ်။
စာမူပေးပို့ရာမှာ adminct@myanmarengineer.org သို့ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီး ၊ မိမိစာမူကို attach file မှာတွဲပေးပါ။
Subject နေရာမှာ ကဗျာဆို ကဗျာ ၊ ကာတွန်းဆို ကာတွန်းဆိုပြီး သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်ကို ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြပေးပါ။
အီးမေလ်းရဲ့ body ထဲမှာ .. ဥပမာအားဖြင့်
အမည် - ရာမညဖိုးလပြည့် ( အမည်ဆိုသည်မှာ ဖိုရမ်အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာနယ်ပါ nick name မဟုတ်ပါ)
ခေါင်းစဉ် - ဆောင်းပါး(အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ) စသဖြင့် ဖော်ပြပေးရပါမယ်။
Contact of Point : adminct@myanmarengineer.org သို့ရောက် ရရှိလာသော စာမူများကို သက်ဆိုင်ရာ အယ်ဒီတာများထံသို့ ပြန်လည့်ပို့ပေးပါ့မယ်။ စာမူတွေ တနေရာထဲ တစုတဝေးထဲရှိနေစေရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာနယ်နဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှ ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်။
စာမူများ နောက်ဆုံးထားပို့ရမည့် နေ့ရက် - (၁၉.၅.၂၀၁၁)
အပြီးသတ် စာစောင် အချောထွက်ရှိဖို့အတွက် သတ်မှတ်ထားသော နေ့ရက် - (၂၉.၅.၂၀၁၁)
You don't need to re-type Zawgyi-One to WinInnwa. You can easily convert using converter/s.
ဟယ် စာပို့ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ..။ မီးမီးတို့လည်း နှမ်းလေးဖြူးချင်ပါတယ်..။ မီးမီး စာမေးပွဲက မေ ၃ ၊ ၄၊ ၁၁ ပါ...။
မီးဘယ်အပိုင်းကို ဘယ်သူနဲ့တွဲပြီး နှမ်းဖြူးလို့ရပါမလဲ...။ နှမ်းပဲဖြူးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်..။ ကိုယ်တိုင်လှီးချွတ် နှယ်ဖတ်သုပ်ကျွေးဖို့
မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး ထင်လို့ပါ..။ နှမ်းဖြူးခွင့်လေးတော့ ပေးကြပါ..။ ဟိဟိ..။
ကျနော် .. ကိုထင်လင်းပြောတဲ့ ကဏ္ဍအနေနဲ့ ဖိုရမ်မမ်ဘာမဟုတ်တဲ့ မောက္ခမဂ္ဂဇင်းရဲ့ အယ်ဒီတာ တစ်ယောက်ကို
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေး ဆောင်းပါးတစ်ခု ကူညီပေးရေးခိုင်းထားပါတယ်။
သူကလဲ လက်ရှိသူရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ယူသုံးခွင့်ပေးပါတယ်။
ပေးပြီးအသုံးပြုတဲ့ ဆောင်းပါး .. လင့်သုံးခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်ပညာရေးစနစ်နဲ့ တရုတ်ဘွဲ့ရများ (http://maukkha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1174:2010-12-16-09-28-43&catid=91:opinion&Itemid=359)
ပညာရေးဖြင့် အာဖရိကကို ပြောင်းလဲခြင်း (http://maukkha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1281:2011-01-21-03-42-28&catid=91:opinion&Itemid=359)
၁၉၄၃ ခုနှစ် ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့ပညာရေး အကြံပြုချက် (http://maukkha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1261:2011-01-13-09-41-00&catid=91:opinion&Itemid=359)
လေပြေလေး ပေးထားတဲ့လင့် ၃ ခုက သူတို့ ဆိုက်မှာ တင်ထားပြီးသားဆိုတော့ .... သိပ်ပြီးအဆင်မပြေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အသစ်ရေးပေးမယ့် ဆောင်ပါးလေးရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရင်စာစောင်တွေကအတွက်ကတည်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ..... စည်းကမ်းလေးတခုနဲ့ညှိနေလို့ပါ။
ကျန်တဲ့အုပ်ချုပ်သူများနဲ့လဲတိုင်ပင်ပြီး အားလုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်အကြောင်းပြန်ပေးပါ့မယ်။
ကိုချစ်သီးပြောတာ မှန်ပါတယ် ... ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဆိုက်၊ ဘလော့ဂ် တို့မှာ ဖော်ပြထားတာမျိုးက အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ အခုဟာက မောက္ခပညာရေး အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းအနေနဲ့ ဖော်ပြထားတာမို့ ဒီစာစောင်မှာ သုံးလို့မသင့်တော်ပါဘူး
လေကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ HUMAN FACTOR ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တာကို ဘာသာပြန်ဆိုထားတာလေးရှိပါတယ်။
ဆြာဖေ(ထင်လင်း)က စာအုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးထဲဝင်သွားတော့ တချို့ အင်/ယာ ပိုင်းဆိုင်ရာစာစောင်တွေ(လေကြောင်း)တည်းဖြတ်တာကျတော့ အားနည်းသွားမည်ဟု ယူဆပါသည်။
:plane:လိုနေတာရှိလဲ ခိုင်းပါနော် .......
အကို ထွန်းအောင်ကျော်တော့ ပျောက်နေတယ်နော်....
သြော် ဘာလိုလိုနဲ့ ၃ နှစ်ပြည့်တာ မြန်လိုက်တာနော် မနှစ်က အလှူကို သတိရလွမ်းဆွတ်မိတယ်....
MEF (၃) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ဂျာနယ်အတွက် Format နဲ့ စည်းကမ်းချက်များ ....... (http://goo.gl/fY0eQ)
ယခုစာမူများစတင်ပို့နိုင်ကြပါတယ်။ ပို့ရမယ့် အီးမေးလိပ်စာကတော့ ... adminct@myanmarengineer.org ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုထွန်းအောင်ကျော် တယောက်က ရာထူးတိုးသွားလို့ အပျော်လွန်ပြီးပျောက်နေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်အရ သူများဝက်ဆိုက်မှာ တင်ပြီးသား ကိုထည့်ဖို့ အဆင်မပြေတာမို့ .....
အသစ်ရေးပေးမယ့်ဆောင်းပါးလေး ရနိုင်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါမယ် ... လေပြေလေးရေ .... ။
တခြားစိတ်ဝင်စားသူမန်ဘာများအနေနဲ့လဲ မိမိတို့အသစ်ရေးချင်တာလေးတွေရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် (သို့) ဖိုရမ်ထဲမှာရှိတဲ့ ပို့စ်တွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာတွေကို ပို့စ်ပိုင်ရှင်တွေ ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် edit လုပ်လို့ ဆောင်းပါးကောင်းတွေအဖြစ် နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အတွက် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ကြရင်ကောင်းမယ်နော် ..... ။
ဦးရီး ရေးထားတဲ့ Post တချို့နဲ့ ဒူဒူ ရေးထားတဲ့၊ Post တချို့ကို ပြန်လည် တည်းဖြတ်ပြီး၊ ဂျာနယ်မှာဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ဦးရီးကလည်း ခွင့်ပြုပါတယ်။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ မှ၊ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ဒီရက်အတွင်း စာမူပို့ပေးပါ့မယ်။
ကျေးဇူးပါ ဒူဒူကြီးရေ ......
ကိုထွန်းကလဲ သဘောတူမှာပါ ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကလဲ ဖိုရမ်ထဲက တန်ဘိုးရှိတဲ့ပို့စ်တွေကို နဲနဲအသွင်ပြောင်းလို့ နှစ်ပတ်လည်စာစောင်ထဲမှာပါစေချင်ပါတယ်။
အဆင်ပြေအောင် edit လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုရေးခါး အင်တာဗျူးဖို့ကိစ္စကို ဟိန်းလေး မမနေညိုနဲ့တိုင်ပင်ပြီး လုပ်လိုက်ပါမယ်
နှစ်ပတ်လည် စာစောင်အတွက် တောက်တိုမယ်ရတွေ လုပ်ပေးချင်ပါတယ် ... (လွယ်တာလေးတွေပဲ ခိုင်းနော် ... :P)
03-26-2011, 03:59 AM
စာပြန်တာနောက်ကျတဲ့ အတွက် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါစေ။
ပေးအပ်လာမယ့် တာဝန်တွေကို လဲ တတ်နိုင်သလောက် ထမ်းဆောင် ဖို့ အသင့် ရှိပါ၏
အခုရက်ပိုင်း ကျောင်းက ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘာသာ ဖြစ်နေတော့ စာမေးပွဲ ထပ်ထိမှာစိုးလို့ ၀င်မရေးဖြစ်ပဲ ကျေးဖူးလေးပဲ တတ်ပေးနေရပါ၏။
အကိုဟယ်ရီ၊ဦးရီးထွန်း တို့ဦးဆောင် တာဝန်ခွဲပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါ၏ :peace::peace:
-- လေကြောင်းအင်ဂျင်၂၀၀ နဲ့ ဆိုင်တာနဲနဲပါးပါးတော့ ကိုဇင်မောင်ထွန်းနဲ့ကူပြီးဖတ်ပေးနိုင်လောက်ပါတယ်...။
-- စာမူဖောင်ပိတ်ရက် နောက်မကျလွန်းဘူးလား၊ နှစ်ပတ်လည်နေ့ အမီလောက် လုပ်လို့ မရနိုင်ကြဘူးလား...။ (နှစ်ပတ်လည်နေ့ လဲရောက်... စာအုပ်လဲ ဘွား ခနဲ ထွက်လာ.... :lalala:)
-- မဂ္ဂဇင်း ရဲ့စာမူတွေကို စီရင်းနဲ့ကြားထဲမှာ နေရာလွတ်တွေ...ကွက်လပ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်...။ အဲဒါကိုဖြည့်ဖို့... အင်ဂျင်နီယာ ၊သိပံပညာရှင်တွေရဲ့ဆိုရိုးစကား လေးတွေ...။ သူတို့ ပြောခဲ့တဲ့ ဟာသအတိုလေးတွေကို ကြားညှပ်ဖြည့်ပေးရပါမယ်။ အဲဒီအတွက် လဲ တစ်ယောက်ယောက်ကနေ တာဝန်ယူပြီး လိုက်ရှာ၊ ဘာသာပြန် တာလုပ်ပေးရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ စာစီတဲ့လူနဲ့သူနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဖို့ လို မယ်။
-- နောက်တစ်ချက်က .. မနှစ်က မဂ္ဂဇင်းမှာ တခြားဂျာနယ်က ကာတွန်းတစ်ခု(ကာတွန်း လှထွဋ်ဦးရဲ့ကာတွန်း) ပါလာတယ်။ ဒါက မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ မောင်ကောင်းထိုက် ဟာသပဒေသာထဲက ဟာသ(၂)ခုလားမသိဘူး ..ပါလာတယ်။ ဒါလဲသိပ်ဘ၀င်မကျဘူး။
ကိုဇင်မောင်ထွန်းနဲ့တိုက်ရိုက်ညှိပြီးလုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင် လုပ်ပေးပါ ကိုထင်လင်းရေ ....
အတော်များများက အလုပ်တဘက် မို့
(အမြဲ active ဖြစ်ပြီး ဖိုရမ်အတွက် Full time အချိန်ပေးဖို့အားလုံးအတွက် အခက်အခဲရှိကြပါတယ်)
အဲ့ဒါကြောင့် စာမူအတွက်ပေးပို့ကြမယ့်သူတွေလဲ အဆင်ပြေအောင် ....
အားလုံးအတွက် ပိုပြီးတော့ Flexiable ဖြစ်အောင် ...
စာစောင်ကိုလဲ ပိုဂရုစိုက်နိုင်အောင်လို့ ...
အားလုံးတိုင်ပင်ပြီး .... နှစ်ပတ်လည်စာစောင်ကို နှစ်ပတ်လည်လ ဖြစ်တဲ့ မေလအတွင်း ထွက်ရှိနိုင်အောင် စီစဉ်ထားလိုက်တာပါ .... ကိုထင်လင်းရေ ... အားလုံးအတွက် အားလုံးတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ထားကြတာပါ ...
(ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆို စာစောင်ကို ပြန်စစ်ချိန်ကိုကစလို့ အတော်လဲ ကတိုက်ကရိုက်နဲ့အတော်ပြိုင်းသွားကြရတယ် မဟုတ်လား ... အဲ့ဒါကြောင့်ပါ)
-- မဂ္ဂဇင်း ရဲ့စာမူတွေကို စီရင်းနဲ့ကြားထဲမှာ နေရာလွတ်တွေ...ကွက်လပ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်...။ အဲဒါကိုဖြည့်ဖို့... အင်ဂျင်နီယာ ၊သိပံပညာရှင်တွေရဲ့ဆိုရိုးစကား လေးတွေ...။ သူတို့ ပြောခဲ့တဲ့ ဟာသအတိုလေးတွေကို ကြားညှပ်ဖြည့်ပေးရပါမယ်။ အဲဒီအတွက် လဲ တစ်ယောက်ယောက်ကနေ တာဝန်ယူပြီး လိုက်ရှာ၊ ဘာသာပြန် တာလုပ်ပေးရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ စာစီတဲ့လူနဲ့သူနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဖို့ လို မယ်။
ဒီကိစစ်လေးကို ဘယ်သူတာဝန် ယူပေးနိုင်မလဲ မသိဘူး။ ဘယ်နေရာလေးတွေမှာ သွားရှာဖတ်ကြည့်လို့ရနိုင်မလဲ မသိဘူး။
လောလောဆယ် ဒီလိုနေရာအတွက် အင်တာနက်က ရတဲ့ ဟာသ ကာတွန်းလေးတွေ ရောထည့်ချင်သေးလား ကိုထင်လင်း ....
ဖိုရမ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဟာသပုံလေးတွေ ထည့်ချင်ရင်တော့ ....
Drawing အတွက်အတိအကျလုပ်ပုံများ ... (http://myanmarengineer.org/forums/showthread.php?386-%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%82%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7-%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8&p=2008&viewfull=1#post2008)
Building Contractor of the Year 2008 awards (Singapore) (http://myanmarengineer.org/forums/showthread.php?386-%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%82%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7-%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8&p=16641&viewfull=1#post16641)
များလိုက်တဲ့ အထက်လူကြီးများ (http://myanmarengineer.org/forums/showthread.php?386-%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%82%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7-%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8&p=25330&viewfull=1#post25330)
-- နောက်တစ်ချက်က .. မနှစ်က မဂ္ဂဇင်းမှာ တခြားဂျာနယ်က ကာတွန်းတစ်ခု(ကာတွန်း လှထွဋ်ဦးရဲ့ကာတွန်း) ပါလာတယ်။ ဒါက မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ မောင်ကောင်းထိုက် ဟာသပဒေသာထဲက ဟာသ(၂)ခုလားမသိဘူး ..ပါလာတယ်။ ဒါလဲသိပ်ဘ၀င်မကျဘူး။
ဒါမျိုးလေးတွေကိုတော့ သတိထားဖို့လိုပါမယ် ။ အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ မဖြစ်ရအောင် အချိန်နဲနဲပိုယူထားတဲ့သဘောပါ။
ကာတွန်းအတွက် အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေတယောက် ဆီကလဲ request လုပ်ထားပါသေးတယ်။
သူ့လက်ရာလေးတွေကတော့ .... ဒီနေရာမှာ (http://www.facebook.com/album.php?id=1777137378&aid=24629) ရှိပါတယ်။
ကျနော်လဲ ဆွဲဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါအုံးမယ်။ မဆွဲဖြစ်တာ အတော်ကြာနေပါပြီ။
စာအုပ်အပြင်အဆင်အတွက် ကိုထင်လင်း နဲ့ လေပြေလေး တို့ကိုလဲ အားကိုးရမှာဘဲ ....
လူအင်အားလိုသေးလား မသိဘူး .... ဘယ်သူတွေ Photoshop ကျွမ်းကျင်ပြီး ပါဝင်ကူညီပေးနိုင်ကြသေးပါသလဲ ပြောပြကြပါအုံး ....
စာစောင်မျက်နှာဖုံးကတော့ ဖိုရမ်စာစောင်အမည် (http://myanmarengineer.org/forums/showthread.php?7429-(3)-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%B9-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-.....)နဲ့လဲ ဆက်စပ်နေမှာမို့ .... အဲ့ဒီအတွက် အချိန်နဲနဲစောင့်ဖို့လိုအုံးမယ်ထင်ပါတယ် ...
တည်းဖြတ်ပေးမယ့် သက်ဆိုင်ရာ အယ်ဒီတာတွေဆီကနေ ပြန်ရာမယ့်စာမူတွေကို ဘယ်အီးမေး (ကိုထင်လင်းနဲ့လေပြေလေး) တွေဆီ ပို့ထားပေးရမလဲဆိုတာ အီးမေးလိပ်စာလေးတွေ ကျနော်ဆီကို စာချွန်လွှာနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် email နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပို့ထားပေးပါ ....
လောလောဆယ်တော့ နည်းပညာဆောင်းပါး တပုဒ် နဲ့ ကဗျာ တချို့တော့ လက်ခံရရှိထားပါတယ်။
စာမူလေးတွေ ရေးသားပေးပို့ကြပါအုံး .... သိပ်အားမရဘူးဖြစ်နေတယ် ....
MEF (၃) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ဂျာနယ်အတွက် Format နဲ့ စည်းကမ်းချက်များ http://goo.gl/fY0eQ
(၃) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အတွက် စာမူများပေးပို့ရန် ... adminct@myanmarengineer.org
လောလောဆယ်တော့ ကွန်ပျူတာအပိုင်းအတွက် ဦးဆောင်ပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်....
ကိုရေခါးဖြစ်ဖြစ် ကိုသိုးကျောင်းသားဖြစ်ဖြစ် ဦးဆောင်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး အစီအစဉ်ဆွဲလိုက်ပါလား... ကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးပါမယ်... ကျွန်တော်အခြေအနေကိုလဲ ကိုချစ်တီးကို private msg ပို့ထားခဲသလိုပါပဲ...
ကျွန်ပျူတာပိုင်းအတွက်ဆိုရင် ကိုနေလဲ ရှိတယ်...ကိုနေလဲ ၀ိုင်းကူလို့အဆင်ပြေရင် ၀ိုင်းကူပါဦး....
လောလောဆယ်တော့ ကွန်ပျူတာအပိုင်းအတွက် ဦးဆောင်ပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်....
ကိုရေခါးဖြစ်ဖြစ် ကိုသိုးကျောင်းသားဖြစ်ဖြစ် ဦးဆောင်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး အစီအစဉ်ဆွဲလိုက်ပါလား... ကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးပါမယ်... ကျွန်တော်အခြေအနေကိုလဲ ကိုချစ်တီးကို private msg ပို့ထားခဲသလိုပါပဲ...
ကျွန်ပျူတာပိုင်းအတွက်ဆိုရင် ကိုနေလဲ ရှိတယ်...ကိုနေလဲ ၀ိုင်းကူလို့အဆင်ပြေရင် ၀ိုင်းကူပါဦး....
ရပါတယ် ချင်းတွင်းသားရေ .....
ကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေရောက်လာခဲ့ရင် တည်းဖြတ်ပေးဖို့ပါ။
အခုလောလောဆယ်တော့ ဘယ်ဆောင်းပါးမှ လက်ခံမရရှိသေးပါ .... စောင့်မျှော်နေဆဲပါ ....
ကိုနေကလဲပြောထားပါတယ် .... လိုအပ်လာရင် ကိုနေဆီကလဲ အကူအညီတောင်းမှာပါ ....
လောလောဆယ်တော့ ကျနော် အိမ်ပြန်နေလို့ အခုမှပဲ အင်တာနက်ပြန်ဝင်ဖြစ်တယ်ဗျာ။ ကျနော် ဧပြီလကုန် (၂၄ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း) လောက်မှပဲ ကူညီနိုင်ပါမယ်။
အဲဒီအချိန်ဆိုရင်လည်း စာမူအားလုံးက ထုတ်ဖို့အသင့်အနေအထားဖြစ်နေလောက်ပြီလားမသိဘူး။ ပြန်ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျန်နေသေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိရင် ကူပါ့မယ်။
ကိုချစ်တီး ပြောတဲ့ ဟာသပုံလေးတွေကောင်းတယ်ဗျ။ :cheer2: နောက်ပြီး ဟာသမဟုတ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတပုံလေးတွေ လဲကြားညှပ်ထည့်ပေးစေချင်တယ်။ (ဒါကတော့ စာစီတဲ့အဖွဲ့ တွေ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း ထည့်ပေးလို့ ရပါတယ်။)
လူအင်အားများများသုံးရမယ့်အပိုင်းက စာမူအကြမ်းတွေကို ပြန်လည်စီစဉ်တဲ့နေရာမှာ လိုပါလိမ့်မယ်။ စာမူများလေလေ စာတွေကိုနေရာချစီစဉ်တဲ့လူ ပျားတုပ်လေလေပါပဲ။ ဒီတော့ စာမူတွေရလာရင်-
(၁) စာမူတွေကို Register လုပ်ရမယ်။
(၂) ဘယ်စာမူကို ရှေ့ဆုံးမှာထားမယ်။ ဘယ်ဟာကို ဒုတိယမှာထားမယ်.....စသည်ဖြင့် Line up လုပ်ရမယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြောရရင် လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဆောင်းပါးချည်းပဲ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဖြစ်နေတာမျိုး၊ စာရေးသူ တစ်ယောက်ထဲရေးထား တဲ့ စာမူ(၂)ခု က ကပ်လျက်ဖြစ်နေတာမျိုး၊ ရသ အက်ဆေး တွေပဲ ထပ်နေတာမျိုး.... စတာမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်...စာမူတွေကို နံပါတ်စဉ်တပ်ပြီး Line-up ဆွဲမယ်။
(၃) Line up ဆွဲပြီးသားစာမူတွေကို လူခွဲပြီးလုပ်ကြမယ်...။ စာမူနံပါတ်(၁) ကနေ (၇) အထိက ဘယ်သူတာဝန်ယူ... စာမူ(၈)ကနေ(၁၄) အထိက ဘယ်ဝါတာဝန်ယူ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
(၄) စာမူတွေကို အဲ့ဒီလို ပြန်ပြီးစီတဲ့အခါမှာ သုံးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ ကတစ်မျိုးတည်းဖြစ်ရမယ်။ မနှစ်ကတုန်းကတော့ Microsoft Publisher 2007 ကိုသုံးတယ်နဲ့ တူတယ်...။ တစ်ယောက်စီကလုပ်ထားတဲ့ Publisher file တွေကိုPDF မှာပြန်ပြီးတွဲပေါ့။ (စာမျက်နှာ နံပါတ်တပ်ဖို့ ကပြန်ညှိရလိမ့်မယ်။)
(၅) သရုပ်ဖော်ပုံတွေကိုတော့ စာစီတဲ့လူတွေဆီကို ပို့ ရမယ်။ သူတို့ ကနေပြီး စာမူနဲ့ ပုံနဲ့ အဆင်ပြေအောင်တွဲပေးရမယ်။
(၆) အားလုံးကိုခြုံပြီး All round check ကိုလုပ်ဖို့ ... QC check လုပ်ဖို့ ကတော့ ကိုချစ်တီး တို့ ပေါ့ဗျာ...နော... :7:
----- စဉ်းစားမိတာလေးတွေပါ -------
လိုတာရှိရင် ဆက်သွယ်ဖို့ နဲ့ ၊ စာမူလက်ကမ်းပို့ ထားဖို့ က ကျနော့် Gmail ပေးထားပါမယ်။
ကျနော်လည်း အခုတလော အလုပ်ကိစ္စအပါအ၀င် လူမူရေးကိစ္စတွေနဲ့ဗျာများနေလို့အင်တာနက် ၊ email တောင် သိပ်မ၀င်ဖြစ်သလို ဖိုရမ်နဲ့ လည်း ထိတွေ့ မှုအရမ်းနည်းနေပါတယ်..
အဲဒီအတွက်လည်း အားလုံးကို နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးဖို့ပြောလိုပါတယ်..
ဘာဖြစ်လို့ လည်း ဆိုတော့ ကျနော်အလုပ်များသလို .. ကိုချစ်သီးအပါအ၀င် တချို့ ဖိုရမ်မာတွေလည်း မိသားစု ကိစ္စတွေ ၊ အလုပ်ကိစ္စတွေ များနေတဲ့ကြားထဲက ဖိုရမ်ထဲ အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နေတာ တွေ့ ရလို့ ..
အလုပ်ကိစ္စများနေလို့ ပါဆိုပြီး ပြောရတာ စိတ်ထဲ သိပ်မလုံသလို ဖြစ်နေပါတယ်..
ဘာတာဝန်ယူရမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားလိုက်တိုင်း ကတိပေးပြီးမှ ပျက်ကွက်နေရင် အားလုံးကို အားနာရ ကိုယ့်ကြောင့် အလွဲအချော်ဖြစ်မှာတွေစိုးပြီး ၀င်မဆွေးနွေးဖြစ်ပါဘူး..
တတ်နိုင်သမျှတော့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေးပါမယ်...
ရှေ့ က မအေး ပြောသွားသလိုပေါ့.. နှမ်းဖြူးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခင်ဗျား..
ဒီဖိုရမ်ကို ကျွန်တော်အခက်အခဲတွေဖြစ်လို့ ၀င်လာပြီးနောက်ပိုင်း ကိုချစ်သီးအပါအ၀င် မင်ဘာတွေ စေတနာထားပြီး မအားတဲ့ကြားက ဖြေပေးကြတာတွေ့လို့ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ ဖိုရမ်ကိုလည်း သံယောဇဉ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာက ရန်ကုန်မှာတောင် ကွန်နရှင်တအားဆိုးနေပါတယ်။ နယ်မြို့တွေဆိုတော့ ကွန်နရှင်က မရတလှည့် ပျက်တလှည့်ပါ။ အခုတောင် ဖိုရမ်ကို မနည်းဝင်ရပါတယ်။ စာစောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ အပြင်အလုပ်ရှိရင် လုပ်ပေးပါမယ်။ စာမူတွေ ခေါင်းစဉ်တွေတော့ မစဉ်းစားမရေးတတ်လို့ပါ။
03-28-2011, 06:05 AM
ဆြာချစ်ခင်ဗျား .. ဟိုတစ်နေ့က အကိုဇင်မောင်ထွန်း ပို့လာတဲ့ စာမူကို ကျနော် Forward လုပ်လိုက်တယ်လေ။
အဲဒါ မရသေးဘူးလား ခင်ဗျ ..။
ကျနော်လက်ခံရရှိပါတယ်။ ကိုဇင်မောင်ထွန်းကလဲ တိုက်ရိုက်ပို့လာလို့ သူ့ကိုလဲ လက်ခံရရှိကြောင်း အကြောင်းလဲပြန်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်က တော့ MEF လိုဂို စတစ်ကာပါတဲ့ အကျီ်လေး အမှတ်တရ လုပ်စေချင်ပါတယ်။။။။။။
စာစောင်ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် စာမူအင်အား အင်မတန် နည်းနေသေးပါတယ် ခင်ဗျာ ။
အားလုံးသော မန်ဘာများ ကိုယ်သန်ရာ သန်ရာ စာမူလေးတွေ ရေးသားပေးပို့ကြပါအုံးလို့ ... တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အသိပေးလိုက်ပါရစေ .... ။
ဖိုရမ်ထဲက ပို့စ်ကောင်းကောင်းလေးတွေကို ဆောင်းပါးအဖြစ် ပြန်လည်အသွင်ပြောင်းအသက်သွင်းကြမယ့် သူများလဲ အားထည့်ပြီး လုပ်ပေးကြဖို့ Remind လုပ်ပါရစေ ။
(ကိုယ်စီကိုယ်စီအလုပ်ရှုပ်နေကြမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိပေမယ့် .... )
လက်ရှိရရှိထားသော စာမူ စာရင်း (31.3.2011)
၁။ ကဗျာ - ၇ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်)
၂။ အက်ဆေး - ၁ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်)
၃။ ဆောင်းပါး - ၃ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်)
(မှတ်ချက် # ကိုဇင်မောင်ထွန်းပို့ထားတာကိုတော့ ကိုဇင်မောင်ထွန်းဘဲ ပြန်စစ်ပြီး ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါ။ဘယ်သူ့ဆီပို့ရမလဲမသိလို့ပါ)
Format ညှိတာကတော့ ကူပေးလို့ရမယ်ထင်တယ်..။ ရေးချင်တဲ့စာတစ်ပုဒ်ကတော့ရှိတယ်..။ ဒါပေမယ့်သူက ဒေတာတွေမှန်ဖို့လိုမှာမို့
အချိန်ပေးပြီးရေးရမှာဖြစ်နေလို့ မရေးတော့ဘူးလားလို့ပါ..။ ရေးကြည့်လိုက်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အချိန်မီသေးရင်တော့ ပါမှာပေါ့ခင်ဗျာ..။
မေ၁၂ဆိုအားသွားပါပြီ..။ တတ်နိုင်တာကူလုပ်ပေးချင်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်တစ်ဆိတ်မေးလ်လေးတော့ပို့ပြီးအကြောင်းကြားပေးပါ အက်ဒမင်ကြီးခင်ဗျား..။
ဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာလေး ဘာခိုင်းရင်သင့်တော်မလဲဆိုတာလေး စဉ်းစားထားပေးပါ..။ မေ၁၂ ကနေစပြီး ကူညီနိုင်ပါပြီ..။
တာဝန်များ ကျန်သေးရင် လုပ်ပါဦး ဘယ်နားထည့်ထည့်ဝင်လိုက်မယ်.. စာရေးပေးဖို့ က ကိုယ့်ပညာ ကလိုသေးတယ်ထင်လို့ ပါ.... ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး..တော့ အချို့ တော့ရေးချင်တာလေးတွေရှိပါတယ် CMS localization တို့ ဘာတို့ကိုယ်လုပ်ဖြစ်နေတာလေးတွေကို ပါ..။ ပြောပါ ဖိုရမ် ကဘာလိုလဲဆိုတာ ..လုပ်ပေးပါ့မယ်
အစ်ကိုတို့ရေ (သို့) မောင်လေးတို့ရေ
ကျွန်တော်တွေးမိသလောက်ဆို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ဆိုရင် NTU ကျောင်းတက်ရအောင်ရယ် NUS ကျောင်းတက်ဖို့ပြင်ဆင်သင့်တာတွေရယ်ကို
အစ်ကိုချစ်သီးနဲ့ဖြိုးမောင်မောင်ရေးထားတဲ့ပို့စ်တွေမှာ ရေးထားတာလေးတွေ ထည့်သင့်တယ်ခင်ဗျ..။ များသောအားဖြင့်က ရန်ကုန်ကလူတွေက ဒီသတင်းတွေကို
လက်လှမ်းမီတယ်..။ နယ်ကျောင်းတွေ ရန်ကုန် မန္တလေးမြို့တွေကမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီမှာကျောင်းတက်ဖို့ လူအား.. ငွေအား .. စိတ်အား ပြင်ဆင်ရတာ
အများကြီးအချိန်ကုန်တယ်ခင်ဗျ..။ ကျောင်းတက်ချင်ရင်ရန်ကုန်ရောက်မှ သတင်းကအစုံရတာ..။ ကျွန်တော့်အတွက်ဆိုရင်တောင်အစ်ကိုချစ်သီးဖြည့်ပြထားတဲ့ဖောင်..၊
ဖြိုးမောင်မောင်ဆွေးနွေးပေးထားတဲ့အချက်လေးတွေကြောင့် ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းက ပိုပီပြင်လာတာ..။ ဒါကအဲဒီကလူတွေကို ဒီကိုလာအကုန်
ကျောင်းဆက်တက်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး..။ လာဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့သူတွေကို လမ်းကြောင်းပိုလွယ်အောင် အကူအညီပေးတဲ့သဘောပါ..။
ဒါ့ကြောင့်မို့ ဒီနှစ်နှစ်ပတ်လည်မှာ NTU လျှောက်နည်းထည့်ပြီး..၊ နောက်နှစ်နှစ်ပတ်လည်ဆို NUS..၊ နောက်နှစ်ဆို ထိုင်းက AIT..၊ နောက်နှစ်ဆို သြော်စီက
ဘယ်ကျောင်း.၊ နောက်နှစ်ဆို ဂျပန်ကဘယ်ကျောင်းဆိုတာလေး စီစဉ်ပြီးထည့်ပေးရရင် ကောင်းမယ်ခင်ဗျ..။ ပိုလီကိုထည့်မပြောတာက မြန်မာနိုင်ငံက GTC နဲ့
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကဒီကိုအလာများကြလို့ပါ..။ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရပြီးရုံနဲ့မကျေနပ်ဘဲ မာစတာကိုပါဆက်တက်ချင်သေးတဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်လို့ပါခင်ဗျာ..။
နောက်တစ်ခုလေးအကြံပေးချင်တာကတော့ စားလုံးပေါင်းသတ်ပုံနဲ့ ၀ါကျအစိပ်အကျဲ အဖြတ်အတောက်လေးတွေမှန်စေချင်ပါတယ်..။ ဂျာနယ်တို့ မဂ္ဂဇင်းတို့မှာ
စာလုံးပေါင်းမှားရင် စိတ်ထဲမသက်မသာခံစားမိလို့ပါ..။ ကျွန်တော့်ကိုအဲဒါစစ်ခိုင်းရင်လည်းစစ်ပေးပါမယ်..။ ၀ါကျအဖြတ်အတောက်က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုက
ဖောင်တွေထည့်ချင်ရင်တော့ လက်ကမ်းစာစောင် palm flat သာ ဝေပါလေ.. ဒါမှပညာရေးဝန်ဆောင်မှူ.. လုပ်ငန်းတစ်ခုဆန်သွားမှာ .. ဒါ NUS တို့ဘာတို့ စလုံးကကျောင်းတွေကို ..ကြေညာပေးတာပဲ သူတို့ ဆီက ငွေတော့ရကောင်းရသင့်တယ်ထင်တယ်။ . ကိုယ်တို့ က မရှိသာမရှိတာ ဇိကတော့ကောင်းသား.. ။ အဲ့ဒါတွေကို သိပ်ပြီးတော့ နည်းပညာသမားကစိတ်ဝင်စားမယ်
မထင်ပါဘူး။အပိုစာသားအများကြီးမလိုဘူးထင်တာပဲ နည်းပညာ ဖိုရမ် ဆိုတော့ လူတွေ က ဖတ်မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ရင်းက နည်းပညာ Articles တွေကို ပဲ မျက်လုံး ကရှာဖတ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဘယ်သူမှအတတ်ကြီး ပါတာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရင်လဲ တတ်သိသူတွေက လာထုဦးမယ် ပါတယ်ဟသူတို့ ကဘယ်လိုဆိုရင်လဲတတ်သိသူတွေပျောက်ကုန်ဦးမယ်)
သင်္ကြန် အမြှောက်ကြီးလိုဖြစ်နေမှာဆိုးတယ်.. ။ ပြန့် ကားထွက်သွားမှာဆိုးပါတယ်။ ဆိုတော့.ရေးစရာရှိမယ့်လူတွေကလဲ Critical ကျကျရေး တင် စု လုပ်.. နဲ့ သိုက်သိုက်ဝင်းဝင်းဖြစ်ချင်တယ်
ဆိုရင်တော့ စကားထည့်လိုက်ရင် ၀င်ပါတာမျိုးမှဖြစ်မှာပါ။ ဆရာကြီးလုပ်တာလဲ မဟုတ်ဘူး..။ ကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ ကိုယ်တော့လူအားလုံးက ဟုတ်နေကြတာပါ။ အခု ကျွန်တော် Article တစ်
စောင် ရေးမယ်လို့ ကျွန်တော်အာမဘန္တေခံလိုက်တာမျိုး ဆို ကျွန်တော်သေချာလိုက်လုပ်ပေးရမှာပါ။ .. အစ်ကို အစ်မတွေအနေနဲ့တစ်ခုတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ လုပ်ကြပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်
တို့ ခပ်သွက်သွက်နဲ့ ခပ်ကောင်းကောင်းဖြစ်ဖို့ ပါ..။ Articles တွေကို ပဲ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကတော့ အမှတ်တရ စာစောင်မှာ ဖီလ်းလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ အခြား စာစောင်တွေဖြစ်တဲ့
လောက အလှတို့ ဘာတို့ ကို တော်တော်သဘော ကျကျ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ဖတ်ဖူးလို့ ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မှာက တစ်နှစ်မှတစ်ခါထွက်တာကိုး ။ သူများတွေလို ခဏတိုင်းထွက်တာမဟုတ်တော့။
တစ်ခါထွက်တဲ့အထွက်ကို ထက်နေအောင်သွေးပြီး လုပ်မှဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Directions တွေကားမသွားဖို့ ။အင်ယာဖိုရမ်ထဲမှာရှိတဲ့ ပိုစ့်တွေတော့ပစ်ကောင်းတွေကိုသာရှာထုတ်တယ်ထား
ဦး အစောင်တော်တော်များများရမှာပါ။ poster ကိုယ်တိုင်က ပြန်ရွေးပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက ကြိုက်တယ်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပါ။ အချိန်တော်တော်ပေးပြီးတော့ စဉ်းစားလာ
တယ်ဆိုပေမယ့်စုတ်ချာကောင်းစုတ်ချလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် Own production ဖြစ်တယ်
ဒီအတွက်ကတော့မပူပါနဲ့ Converter တွေရှိပါတယ် တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရင်ပြောင်းသွားမယ်ပြီးရင်နည်းနည်း Justified လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။
တစ်ခုတော့ရှိတယ် Zawgyi-one ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Editor တွေတော့ခေါင်းခြောက်
ပြီသာမှတ်.. ဟိုးတစ်ခါဖိုရမ် ဂျာနယ် မှာ Articles လေးတစ်ခု ဖတ်ဖူးလိုက်တာရှိတယ် ။ Ayar unicode ဆိုလား
အဲ့ဒါနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖောင့်ပိုင်းကို တာဝန်ယူပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ http://atp.ayar.co မှာနေတာကြာလာ
လို့ လားမသိဘူး ဧရာတော့ ပေါင်းစုံဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့ ကတော့ အခုတစ်လော လူတွေအရူးထနေကြတဲ့
ယူနီကုတ် အဆင့်မှီရေ မှီရေးကော နောက်ပြီး Editor တွေအတွက်ကော ခေါင်းစားရမယ့် ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတစ်ခု
ကို .. အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ အာမ၀င်ခံတာမဟုတ်ပေမယ့် စိတ်ပါရင်..လက်တို့ လိုက်ပါက တစ်ချက်ပဲခေါင်းငြိမ့်လိုက်မယ်။
Open Source CFD toolbox နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာတမ်းတစ်စောင် ရေးနေပါတယ်။ အဲဒါလေး ပြီးသွားရင် မြန်မာလို ဘာသာပြန်ပြီး ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ပို့ပေးပါ့မယ်။ အင်တာနေရှင်နယ် စာတမ်းပေါ့ဗျာ။ ခုတော့ အဲဒါလေး လက်စသတ်နေပါတယ်။ ဆရာ နဲ့ တိုင်ပင်ရဦးမှာ မို့လို့ပါ။
ကျနော် တစ်ခုဝင် လျှာရှည်ကြည့်ချင်တာက တော့ .... ဆောင်းပါးတွေကို Level အစုံအတွက် ဦးတည်ပြီးရေးသင့်တယ်။ B.Tech တို့ B.E တို့ လိုမျိုး ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် ရော ရည်ရွယ်ပြီး သူတို့ လဲလိုက်နိုင်မယ့် ဆောင်းပါးလေးတွေ စာလေး တွေရေးစေချင်ပါတယ်။ သိပ်အမြင့်ကြီးတွေများနေရင်လဲ စာဖတ်တဲ့လူ ကျော်ဖတ်သွားမှာပဲ။:confuseds:
ကျနော် မနှစ်က အဲဒီကွန်ဗက်တာနဲ့ပဲ တိုင်ပတ်တာ .. ကျနော်တင်မဟုတ်ဘူး အကိုရာမညရော၊ ဆြာချစ်တို့ရော တိုင်ပါတ်တာ၊ :frusty:
ဧရာက ဖိုရမ်မှာ ဥပမာ လူတစ်ရာရှိရင် အယောက် ၉၀ လောက်ရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ မရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။
ကြာပါတယ်ဗျာ .. ပို့ချင်တာနဲ့ ပို့လိုက် အချိန်မီရင် အသစ်ပြန်ရိုက်ပစ်လိုက်မယ်။
ဘယ်လောက်မှ များတာမှမဟုတ်တာနော် ..။
ဆြာချစ်ရေ အချိန်ကတော့ ကပ်လာပြီနော် ။။ စသင့်နေပြီထင်၏။
အိုကေ ကိုလေပြေလေး ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ စာရင်းထဲမှာရှိတော့ အစ်ကိုတို့ သုံးယောက်ရှိတာတွေ့ တယ် အကယ်လို့ ကျွန်တော့်ကိုလဲ ပါခိုင်းမယ်ဆိုရင်ပါချင်ပါတယ်
ကွန်ပျူတာတော့အကျွမ်းကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ဖိုရမ် အတွက်ကူပေးချင်လို့ ပါ...ဒါပါပဲ ဘယ်သူမှတော့ဆရာကြီးတွေမပါဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလား
ကျနော် မနှစ်က အဲဒီကွန်ဗက်တာနဲ့ပဲ တိုင်ပတ်တာ .. ကျနော်တင်မဟုတ်ဘူး အကိုရာမညရော၊ ဆြာချစ်တို့ရော တိုင်ပါတ်တာ၊ ဧရာက ဖိုရမ်မှာ ဥပမာ လူတစ်ရာရှိရင် အယောက် ၉၀ လောက်ရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ မရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။
ဆြာချစ်ရေ အချိန်ကတော့ ကပ်လာပြီနော် ။။ စသင့်နေပြီထင်၏။
စာမူတွေက အယ်ဒီတာတွေဆီမှာ အကုန်ပို့ပေးထားပါတယ်။
ရွေးချယ် edit လုပ်ပြီးတာနဲ့ လေပြေလေး နဲ့ ကိုထင်လင်းဆီ လှမ်းပို့ပေးကြပါလိမ့်မယ်။
MEF (၃) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ဂျာနယ်အတွက် Format နဲ့ စည်းကမ်းချက်များ (http://goo.gl/fY0eQ) က သတ်မှတ်ထားကြပြီးဖြစ်လို့ ...
ဒီအကြောင်းကို ဆက်လက်မဆွေးနွေးကြဘဲ ....
စာမူရရှိရေးအတွက် အလေးထားလို့ ၀ိုင်းဝန်းပြီးစည်းရုံးရေး ဆင်းပေးကြဖို့ .... တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါရစေ .....
စာစောင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် .... စာမူအင်အားလိုအပ်နေပါသေးတယ် .... ။
စာမူမလုံလောက်လို့ စာစောင်မထုတ်လိုက်ရဘူးဆိုတာမျိုး ဖြစ်သွားမှာ .... များစွာစိုးရိမ်မိပါတယ် ... ။
ကျွန်တော်တွေးမိသလောက်ဆို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ဆိုရင် NTU ကျောင်းတက်ရအောင်ရယ် NUS ကျောင်းတက်ဖို့ပြင်ဆင်သင့်တာတွေရယ်ကို အစ်ကိုချစ်သီးနဲ့ ဖြိုးမောင်မောင်ရေးထားတဲ့ပို့စ်တွေမှာ ရေးထားတာလေးတွေ ထည့်သင့်တယ်ခင်ဗျ..။ များသောအားဖြင့်က ရန်ကုန်ကလူတွေက ဒီသတင်းတွေကို လက်လှမ်းမီတယ်..။ နယ်ကျောင်းတွေ ရန်ကုန် မန္တလေးမြို့တွေကမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီမှာကျောင်းတက်ဖို့ လူအား.. ငွေအား .. စိတ်အား ပြင်ဆင်ရတာ အများကြီးအချိန်ကုန်တယ်ခင်ဗျ..။ ကျောင်းတက်ချင်ရင် ရန်ကုန်ရောက်မှ သတင်းကအစုံရတာ..။ ကျွန်တော့်အတွက်ဆိုရင်တောင်အစ်ကိုချစ်သီးဖြည့်ပြထားတဲ့ဖောင်..၊
ဖြိုးမောင်မောင်ဆွေးနွေးပေးထားတဲ့အချက်လေးတွေကြောင့် ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းက ပိုပီပြင်လာတာ..။ ဒါကအဲဒီကလူတွေကို ဒီကိုလာအကုန် ကျောင်းဆက်တက်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး..။ လာဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့သူတွေကို လမ်းကြောင်းပိုလွယ်အောင် အကူအညီပေးတဲ့သဘောပါ..။
ဒါ့ကြောင့်မို့ ဒီနှစ်နှစ်ပတ်လည်မှာ NTU လျှောက်နည်းထည့်ပြီး..၊ နောက်နှစ်နှစ်ပတ်လည်ဆို NUS..၊ နောက်နှစ်ဆို ထိုင်းက AIT..၊ နောက်နှစ်ဆို သြော်စီက ဘယ်ကျောင်း.၊ နောက်နှစ်ဆို ဂျပန်ကဘယ်ကျောင်းဆိုတာလေး စီစဉ်ပြီးထည့်ပေးရရင် ကောင်းမယ်ခင်ဗျ..။ ပိုလီကိုထည့်မပြောတာက မြန်မာနိုင်ငံက GTC နဲ့
အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကို ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်တွေ့ကြုံရတဲ့ ၊ ရှာဖွေလေ့လာ apply လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ .... အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်က ဆွေးနွေးချက်တွေကို သင့်လျော်သလိုပေါင်းစပ် ဖြတ်ညှပ်ကပ်လို့ ....
သင့်လျော်ရာ ခေါင်းစဉ် တခုပေးပြီး
မြန်မာပြည်က ကျောင်းလာတက်ချင်သူတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် ... ဆောင်းပါးတပုဒ်လောက် ဖန်တီးပေးပါလား ။
ဒီနေရာလေးမှာ (http://myanmarengineer.org/forums/showthread.php?7428-NUS-%E1%80%99%E1%80%BD-Master-of-Science-(Civil-Engineering)) လဲ update to date ဆွေးထားတာလေးတွေရှိပါတယ်။ (မရွှေ့ရသေးလို့)
ရေးချင်တဲ့စာတစ်ပုဒ်ကတော့ရှိတယ်..။ ဒါပေမယ့်သူက ဒေတာတွေမှန်ဖို့လိုမှာမို့ အချိန်ပေးပြီးရေးရမှာဖြစ်နေလို့ မရေးတော့ဘူးလားလို့ပါ..။ ရေးကြည့်လိုက်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အချိန်မီသေးရင်တော့ ပါမှာပေါ့ခင်ဗျာ..။
ဟုတ်ကဲ့ ပါ ...
စာမူနောက်ဆုံးပိတ်ရက် .... 19.5.2011 နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အတွက် စာမူများပေးပို့ရန် ... adminct@myanmarengineer.org ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ကြိုးစားပြီး ရေးသားပေးပို့စေချင်ပါတယ်။
တခုတော့ လျှာဝင်ရှည်ပါဦးမယ်။ ဘာလို့ ခုထိ ဇော်ဂျီ ဖောင့် နဲ့ စာရိုက်ခိုင်းတာလဲ မသိဘူး။ သူကြောင့် ကွန်ပျူတာ မြန်မာစာ စနစ်ဟာ အများကြီး နှောင့်နေးနေခဲ့ပြီ။ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ် လို Leading Website တခု အနေနဲ့ ယူနီကုတ် ကို အသုံးပြုဖို့ အားပေးသင့်ပါပြီ။ ဒီက Admin တွေဆို ကိုယ့်ကိုယ် ကို ဝန်မခံရင် တောင် ပညာရှင် အဆင့်တွေ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီတော့ ဘာတွေ ကွာခြားသလဲဆိုတာ သိပြီးသားလို့ လဲ ယူဆပါတယ်။ ယူနီကုတ်ဟာ အားနည်းချက် ရှိနေရင်တောင် စတင် ပြောင်းလဲ သုံးဖို့ အချိန်ကျနေပါပြီ။ ထင်မြင်ချက်လေးပါ။ အက်ဒမင်များ အလုပ်ရှုပ်မယ်ဆို တောင်းပန်ပါတယ်။
:peace: ကျွန်တော်လဲ ဘာကူရမလဲဗျာ.....စာရိုက်စရာ ရှိရင်လဲ ပြောပါ....တရား စခန်း ၀င်နေလို....( သမာဓိတော. မရပါဘူး....စိတ်က ဟိုရောက် ဒိရောက်နဲ..:bump2:..သီလ တော. ရခဲ.တယ်.....) zawgyi နဲ. ဆိုရင်တော. ပြောပါ.....တစ်ဖက် တစ်လမ်းက ကူညီပါ.မယ်......Win-inwa ဆိုရင်တော. Alt + Shift +Key တွေ မမှတ်မိတော. လို.ပါ......:confuseds: post တွေတော. ရေးချင်တယ်ဗျ.......ဘာရေး လို. ရေးရမှန်း မသိလို..........ကဏ္ဍ စုံစုံလင်လင် ထည်.မှာ လား......ဒါမှမဟုတ် .computer ဂျာနယ်လိုစာအုပ် ထည်.မှာလား.....ဒိတစ်ခါ အစ်ကိုတို. ဘယ်လို Idea စဉ်းစား ထားသလဲ မသိလို.ပါ......အလုပ်ရှုပ်နေတဲ. ကြားထဲက ဖြေကြားပေးပါအုံးဗျာ.....သံယောဇဉ်မင်း ပြောသလို တစ်နှစ်မှ တစ်ခါ ထွက်တာဆိုတော.......ကောင်းကောင်းလေးပဲ ထုတ်စေချင်ပါတယ်လို. ဆန္ဒပြုရင်း........:(
ကျနော် adminct@myanmarengineer.org လိပ်စာဆီသို့ ဒီလ (၃) ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ စာမူတစ်စောင်ပေးပို့ထားပါတယ်။ လက်ခံ ရ/ မရ သက်ဆိုင်သူများ အကြောင်းပြန်ပေးကြပါဦးဗျာ။ တစ်ခုလောက် အကြံပြုပါရစေ။ ပေးပို့ထားကြတဲ့ စာမူ စာရင်းကို ကြေငြာပေးထားနိုင်မယ်ဆိုရင် ကောင်းမလားပဲ။ စဉ်းစားပေးကြပါဦးနော်။ ကျေးဇူးတင်လျက်။
စာမူပေးပို့တဲအတွက် ကျေးဇူးနော်...။ စာမူ ရရှိကြောင်း နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အယ်ဒီတာဆီကို ကိုချစ်သီး တဆင့်ပြန်ပို့ပြီးတဲ့အခါ၊ စာမူရှင်ကို အကြောင်းပြန်ပါလိမ့်မယ်နော်။ လက်တလော အလုပ်များနေတာ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အကြောင်းပြန်တာ နောက်ကျခဲ့ရင်လည်း နားလည်ပေးလိုက်ပါနော်။
ပေးပို့ထားတဲ့ စာမူစာရင်းကတော့ ကျွန်တော် နားလည်မိသလောက် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုး online မဂ္ဂဇင်းတွေမှာလည်း မရှိသလို၊ အခြား မဂ္ဂဇင်းတွေမှာလည်း မရှိဖူးထင်တယ်။ ဒီအတွက် မကြေငြာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေရေးတွေလို အချိန်ပေးပြီး တကူးတက လုပ်ပေးဖို့ အားလုံးမှာ အခြေအနေ မပေးလို့ နောက်ကျမှုများ ရှိခဲ့ရင်လည်း အားလုံးက နားလည်ပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
အခြား စာမူ ပို့သူများအားလုံးအတွက်လည်း ထို့အတူပါပဲ..။ ပေးပို့တဲ့ မေလ်းမှ စာမူလက်ခံရရှိတဲ့အခါ နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အယ်ဒီတာဆီ တဆင့် ပြန်ပေးပို့ပြီးတဲ့အခါ အကြောင်းပြန်စာ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်နော်။
ကျနော် adminct@myanmarengineer.org လိပ်စာဆီသို့ ဒီလ (၃) ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ စာမူတစ်စောင်ပေးပို့ထားပါတယ်။ လက်ခံ ရ/ မရ သက်ဆိုင်သူများ အကြောင်းပြန်ပေးကြပါဦးဗျာ။ တစ်ခုလောက် အကြံပြုပါရစေ။ ပေးပို့ထားကြတဲ့ စာမူ စာရင်းကို ကြေငြာပေးထားနိုင်မယ်ဆိုရင် ကောင်းမလားပဲ။ စဉ်းစားပေးကြပါဦးနော်။ ကျေးဇူးတင်လျက်။
ကိုစိုးညီ (ခေါ်) ကိုငရုတ်ကောင်း ရေ ...
စာမူလက်ခံ ရရှိပါတယ်။ အီးမေးထဲက အချိန်ကတော့ .... Mon, Apr 4, 2011 at 3:11 AM ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တနေ့လုံး ရုံးမှာ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ဖွင့်ကြည့်ဖို့အဆင်မပြေလို့ အခုမှ ပြန်လည်အသိပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရုံးမှာက အင်တာနက်သုံးချင်ပါက မိမိလက်တော့ကို iphone နဲ့ချိတ်လို့ သုံးမှ မြန်မာလိုရေးလို့ရတဲ့အတွက် ... ဖုန်းနဲ့ ဖိုရမ်ထဲ ၀င်ကြည့်ဖြစ်ပေမယ့် ... အခုမှဘဲ စာပြန်လိုက်ရတာပါ ။
(ကျနော်တို့ရုံးက ISO ဆိုလား ဘာလား မသိပါဘူး ၊ Civil Engineer တွေကို အင်တာနက်ပေးမသုံးလို့ ရုံးအီးမေးတော့ အပြင်ကိုပို့လို့ရတယ်)
လက်ခံရရှိထားတဲ့ စာမူတွေကို အသေးစိတ်မဖော်ပြပေးနိုင်ပေမယ့်လို့ Summary အနေနဲ့ အောက်ပါအတိုင်းဘဲ ဖော်ပြ အမြဲ Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
လက်ရှိရရှိထားသော စာမူ စာရင်း (6.4.2011)
၁။ ကဗျာ - ၈ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်)
၃။ ဆောင်းပါး - ၄ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်)
နှစ်ပတ်လည်စာစောင်ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် စာမူအင်အား အင်မတန် နည်းနေသေးပါသည်။ အားလုံးသော မန်ဘာများ ကိုယ်သန်ရာ သန်ရာ စာမူလေးတွေ ရေးသားပေးပို့ကြပါအုံးလို့ ... တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အသိပေးလိုက်ပါရစေ .... ။ ဖိုရမ်ထဲက ပို့စ်ကောင်းကောင်းလေးတွေကို ဆောင်းပါးအဖြစ် ပြန်လည်အသွင်ပြောင်းအသက်သွင်းကြမယ့် သူများလဲ အားထည့်ပြီး လုပ်ပေးကြဖို့ Remind လုပ်ပါရစေ ။
ကျနော်လည်း အလုပ်အရမ်းရှုပ်နေတာနဲ့ ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးချင်သော်လည်း မဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့လို့ တာဝန်မကျေရာ ခံစားမိပါတယ်။
အခုလိုပဲ အစဉ်အလာမပျက်လေး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြမှသာ အဖြစ်မြောက်မှာပါ။
ကိုချစ်သီး တာဝန်ခွဲပေးထားသလိုပဲ ကျနော်ကျရာနေရာကနေ လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ထပ်ပြီး ကူညီနိုင်တာများ ရှိရင်လည်း ပြောပေးကြပါခင်ဗျား
စာမူတွေ အလွန်နည်းနေပါသေးတယ် ... ဂျာနယ်၊ စာစောင်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ အရေးအကြီးဆုံးက "စာမူ" ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာမူပေါ်မူတည်ပြီး အဲဒီ စာနယ်ဇင်း media ရဲ့ အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်တာပါ ...
အဲဒီတော့ စာမူပေးပို့ခြင်းဟာ အခု ကျနော်တို့ ဖိုရမ်ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အတွက် အရေးအကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်တာကြောင့် ထပ်ပြီးရေးသား ပေးပို့ကြပါဦးလို့ တိုက်တွန်း မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ ....
လက်ရှိရရှိထားသော စာမူ စာရင်း Updated (12.4.2011)
၁။ ကဗျာ - ၁၄ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်)
၃။ ဆောင်းပါး - ၈ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်)
အချိန်က အရမ်းကပ်နေပါပြီ အယ်ဒီတာများခင်ဗျား။
ဖြစ်နိုင်ရင် ရွေးချယ်ပြီးသား စာမူများအား ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။
စာစောင် Format ကို စပြီး ချထားချင်လို့ပါ။
ရက်အရမ်းကပ်မှ စာမူတွေ ပို့ပေးရင်တော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ ၁၀ ရက် အတွင်းမှာ ပြီးဖို့ဆိုတာကြီးက နည်းနည်း လန့်စရာကြီးဖြစ်နေလို့ပါ။
ရွေးချယ်ပြီးသား စာမူတွေကို ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းနာတွေအတွက် အလုပ်လုပ်ချိန် ၁၀ ရက်ထဲကျန်တော့တယ်ဆိုလို့ပါ။
ဟိုးအရှေ့မှာဆွေးနွေးထားတဲ့ .... MEF (၃) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ဂျာနယ်အတွက် Format နဲ့ စည်းကမ်းချက်များ (http://goo.gl/fY0eQ) ဆွေးနွေးထားတဲ့ပို့စ် နံပါတ် #22 မှာ Final စာစောင်ထုတ်ဝေမယ့်ရက် 29.5.2011 ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
စာမူပို့ရမယ့် အီးမေးလိပ်စာ adminct@myanmarengineer.org ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်တော့ နဲနဲရပါသေးတယ်။ အယ်ဒီတာများလဲ စာစောင်အတွက် မအားတဲ့ကြားထဲက စစ်ဆေးပေးနေကြတုန်းပါ။
ဒါပေမယ့် သိပ်အားမရသေးတာကတော့ .... စာမူအင်အား နည်းနေသေးပါတယ်။
အထူးသဖြင့် နယ်ပယ်စုံ စာမူတွေ အားနည်းနေသေးပါတယ်။
လက်ရှိရရှိထားသော စာမူ စာရင်း Updated (15.4.2011)
၁။ ကဗျာ - ၁၀ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်)
၃။ ဆောင်းပါး - ၁၄ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်)
အခုလို စာစောင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် နှိုးဆော်ပူပန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
အားလုံး မင်္ဂလာပါ ...
နှစ်ပတ်လည်စာစောင်ကတော့ လုပ်နေကြဖြစ်သလို အရင်နှစ်က လိုအပ်ချက်များကို သင်ခန်းစာယူရင်း ဒီနှစ်အတွက်လည်း ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် .. ကျွန်တော်လည်း အလုပ်များနေလို့ ဖိုရမ်ကနေ လွတ်ထွက်နေတာ သုံးလလောက်ရှိပါတော့မယ် .. အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ (ပေးထားတဲ့ တာဝန်က အကြီးကြီးဗျ .. ဟီး :hail:) ... .. .
ကဲ လုပ်ထားကြစို့ ... :first::first::first:
ကျွန်တော်လည်း သင်္ကြန်အတွင်း ရဟန်းခံနေလို့ပါခင်ဗျာ.... ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဖိုရမ်နဲ့ အဆက်ပြတ်သွားတယ်...... စာမူလည်း ရေးနေပါတယ်..... သတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီ ပို့ပေးပါ့မယ်........ ပုံမှန်အလုပ်တွေကလည်း မပြတ်တော့ ဂျာနယ်ကိစ္စမှာ ထိထိရောက်ရောက်ဝင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်...... လုပ်စရာရှိရင်လည်း အားမနာတမ်းပို့ထားလိုက်ပါ..... တနင်္ဂနွေတိုင်းလိုလိုတော့ ဖိုရမ်မှာ ကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်...... ဆွေးနွေးချက်တွေကနေ ဆောင်းပါးလုပ်ဖို့လည်း ကြိုးစားကြည့်သေးတယ်.... ကိုယ်တိုင်က သေချာမသိတော့ ပြန်လိုက်ဖတ်နေရတာနဲ့အလျင်မမီဘူး....... အဲ့ဒါမျိုးကလည်း တကယ်နားလည်မှလုပ်လို့ကောင်းတာလေ...... တခြားလုပ်ပေးနိုင်မယ့်သူများရှိရင်လည်း ဝင်လုပ်ကြပါဦး..... ကောင်းတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးထားတဲ့ဟာမျိုးကို လုပ်မယ်ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်..... တကယ်ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေလောက် မသိဘဲနဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်တော့လည်း အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဗျ.....
လက်ရှိရရှိထားသော စာမူ စာရင်း Updated (26.4.2011)
၃။ ဆောင်းပါး - ၁၆ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်) ( ၄ ပုဒ် ဒီဇိုင်းနာထံပို့ပေးပြီး)
၄။ ကာတွန်း - ၁ ပုဒ် (ဒီဇိုင်းနာထံပို့ပေးပြီး)
၅။ ဥယျောဇဉ် (ဒီဇိုင်းနာထံပို့ပေးပြီး)
MEF (၃) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ဂျာနယ်အတွက် Format နဲ့ စည်းကမ်းချက်များ (http://goo.gl/fY0eQ)
Final စာစောင်ထုတ်ဝေမယ့်ရက် .... 29.5.2011
စာမူနောက်ဆုံးပိတ်ရက် .... 19.5.2011
စာမူပို့ရမယ့် အီးမေးလိပ်စာ .... adminct@myanmarengineer.org
နယ်ပယ်စုံ စာမူအင်နည်းနေပါသေးသည်။ မန်ဘာများ နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အတွက် ရေးသားပေးပို့ကြပါအုံးခင်ဗျာ။
ကိုလေပြေလေးရေးထားတာတွေ့မိလို့ စိတ်ကူးရပြီးလုပ်ဖြစ်သွားတာပါ... ဇော်ဂျီနဲ့ ရိုက်ထားတာတွေကို Win Innwa ပြန်ပြောင်းရိုက်ရတယ်ဆိုလို့ပါ... Win Innwa ပြောင်းရတာ တယ်အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်... မြန်မာစာကော အင်္ဂလိပ်စာကော ပြန်ပြောင်းရတယ်လေ
ဒီတော့ကျွန်တော်က ဇော်ဂျီကိုပဲ Win Innwa ပုံစံ ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကိုလည်း Arial ပြောင်းလိုက်တယ်...
တစ်ခုပဲရှိပါတယ်... ဇော်ဂျီက (ျှ ) က (ှ) နဲ့ (ျ) ကိုပေါင်းထားတာပါ... သီးသန့်စာလုံးမဟုတ်ပါဘူး... ဒီတော့ ကျွန်တော်က Win Innwa စတိုင် ဟထိုးလေးကို စောင်းစောင်းလေးနဲ့လုပ်ထားပါတယ်... ဒါပေမယ့် ဟထိုးသီးသန့်မှာပါ သွားပြင်သလိုဖြစ်နေတော့
ပုံမှန် (ျှ) က ( Shift + q)
ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တာက (Tide Key + Shift + q )
အဲဒါလေးပဲ ပြန်ပြင်ပေးရမှာပါ... ဒါကလည်း Replace All နဲ့ လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်
ဒီဖိုင်လေးကို (C:\_WINDOWS\_Fonts) ထဲက Zawgyi Font နေရာမှာ Replace လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ... ဒါဆိုရင်တော့ ရှိသမျှ ဆိုဒ်တွေကိုလည်း Win Innwa နဲ့ ဖတ်ရတော့မှာပါ... ကျွန်တော်က အစကတည်းက ဇော်ဂျီကိုသာ လွယ်ကူလို့သုံးနေတာ ဖောင့်ကမလှလို့ စိတ်တိုင်းမကျဘူး... ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျောင်းသုံးဖတ်စာတွေမှာကော တခြားစာအုပ်တွေမှာပါ Win Innwa နဲ့ ရင်းနီးနေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... အခုမှ အဆင်ပြေသွားတယ်...
ဒါပေမယ့် install လုပ်တဲ့နေရာမှာ Window7မှာတော့ ဒီဖောင့်ဖိုင်လေးကို ဖွင့်ပြီး Install Button နှိပ်လိုက်တာနဲ့
အဆင်ပြေပေမယ့် Window XP မှာတော့ (ကျွန်တော့ရုံးကစက်မှာတော့) အခက်တွေ့ပါတယ်.. သူက ရှိပြီးသားဖောင့်ကို အရင်ဖျက်ခိုင်းနေပေမယ့် သွားဖျက်ကြည့်တော့ မရဘူး... သုံးနေတဲ့ Program ရှိလို့တဲ့...
ဒါနဲ့ ရှိသမျှတွေပိတ်ပြီးတော့လည်း မရဘူး.. နောက်ဆုံး Desktop > Right Click > Properties ကနေ
Appearance > Advance မှာ ကျွန်တော်ပြောင်းထားသမျှ ဇော်ဂျီဖောင့်တွေကို တခြားဖောင့်ပြောင်းပေးမှပဲ ဖျက်လို့ရတော့တယ်.. ဒါပေမယ့် ဇော်ဂျီဖောင့်ကို ဖျက်လိုက်တိုင်း ၂စက္ကန့်လောက်အကြာမှာ ပြန်ပေါ်လာပြန်ရော...
ဒါနဲ့ ဖျက်ပြီးပြီချင်း အမြန် Paste လိုက်မှ ရတော့တယ်...
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး Unicode စစ်စစ်ကို ပြောင်းသုံးသင့်နေပါပြီ.. ဒါပေမယ့်လည်း Website အများစုက ဇော်ဂျီနဲ့ပဲရေးထားတော့... ကျွန်တော်လည်း ဒီဇော်ဂျီကိုပြောင်းဖြစ်သွားတာပါ... ဒါပေမယ့် ဒီလိုပြောင်းတာ တရားဝင်မဝင်တော့ မသိပါဘူး.. ကျွန်တော်အခုလို တင်ပေးတယ်ဆိုတာလည်း MEF နှစ်ပတ်လည်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးမှာ အဆင်ပြေအောင်လို့ တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
အကယ်၍ မူပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ ငြိနေမယ်ဆိုရင် ဒီပို့စ်ကို ပြန်ဖျက်ပေးစေချင်ပါတယ်...
ဒီဖောင့်ကို ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတဲ့ စာတွေအားလုံးကို Win Innwa ကိုပြောင်းစရာမလိုတော့ပဲ Print ထုတ်ရင်လည်း
အခုတော့ MEF နှစ်ပတ်လည်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးမှာ ဒီဖောင့်လေးက
အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အဆင်ပြေစေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လုပ်ရကျိုးနပ်မှာပါ...
ကျွန်တော် အခုမှတွေးမိတယ်... ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ Font က Print ထုတ်တဲ့အခါနဲ့ကိုယ်သုံးတဲ့ Computer မှာပဲ အဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်တယ်...
အခုက နှစ်ပတ်လည်စာစောင်ကို PDF နဲ့ ထုတ်မှာဆိုတော့ ဖွင့်ဖတ်တဲ့ User ရဲ့ Computer က ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ပြမှာဆိုတော့ မူရင်းဖောင့်အတိုင်းပဲ မြင်ရမယ်လို့တွေးမိတယ်...
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ PDF လုပ်ပြီး တခြားစက်မှာ မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး...
လက်ရှိရရှိထားသော စာမူ စာရင်း Updated (7.5.2011)
၂။ အက်ဆေး - ၂ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်) (၁ ပုဒ် ဒီဇိုင်းနာထံပို့ပေးပြီး)
၃။ ဆောင်းပါး - ၂၀ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်) ( ၈ ပုဒ် ဒီဇိုင်းနာထံပို့ပေးပြီး)
၄။ ကာတွန်း - ၂ ပုဒ် (ဒီဇိုင်းနာထံပို့ပေးပြီး)
လက်ရှိအခြေအနေအရ အာခီတက်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေက အများဆုံးဖြစ်နေပြီး ၊ Civil & Areo ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာတွေ က ဒုတိယလောက်လိုက်ပါတယ်။
တခြား ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ... စသည်စသည် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ စာမူများကိုလဲ ရေးသားပေးပို့ကြဖို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
ကိုထင်လင်းပြောထားတဲ့ အကြံအတိုင်း .... မန်ဘာတိုင်းပါဝင်နိုင်မယ့် short cut interview အစီအစဉ်လေးအရ .... အောက်ပါမေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေကြားပေးကြဖို့ မန်ဘာတိုင်းကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ ။
၁။ သင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ပညာရေးအတွေ့အကြုံ ၊ (သို့မဟုတ်) အမှတ်တရများကို ပြောပြပါ။
၂။ မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်ကို သင်ဘယ်လို ရှုမြင်ပါသလဲ?
၃။ အကယ်၍သင်သာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့လျှင် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်လာဖို့ဘာတွေကို လုပ်မလဲ။
၄။ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ကို သင်ဘယ်လိုရောက်လာလဲ? ဘာတွေအမှတ်ရစရာရှိခဲ့ပါသလဲ ?
အဖြေလေးတွေကို စိတ်ထဲရှိသလိုရေးပြီး adminct@myanmarengineer.org နဲ့ htinlin.10@gmail.com ၂ ခုစလုံးစီသို့ ပြန်ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။
MEF ကိုသံယောဇဉ်ရှိကြတဲ့ မန်ဘာတွေအနေနဲ့ ဒီလောက်တော့ လုပ်ပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
လက်ရှိရရှိထားသော စာမူ စာရင်း Updated (11.5.2011)
၁။ ကဗျာ - ၁၀ ပုဒ် (ရွေးချယ်ထားသော ကဗျာများကို ဒီဇိုင်းနာထံသို့ပို့ပြီး)
၂။ အက်ဆေး - ၂ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်) (ဒီဇိုင်းနာထံပို့ပေးပြီး)
၃။ ဆောင်းပါး - ၂၀ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်) (၁၁ ပုဒ် ဒီဇိုင်းနာထံပို့ပေးပြီး)
စာမူပိတ်ရက် နီးကပ်လို့လာပါပြီ ၊ မန်ဘာများ စာမူလေးတွေ ပေးပို့ကြပါအုံးဗျာ ..... ။
စာမူပိတ်ရက် တဖြည်းဖြည်းဖြင့်နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်ပါသဖြင့် ......
စာမူလေးတွေ ပေးပို့ကြဖို့ မန်ဘာများ တိုက်တွန်း နိုးဆော် လိုက်ပါရစေ ...... ။
စာမူပိတ်ရန် ၅ ရက်သာလိုပါတော့သည်။
လက်ရှိရရှိထားသော စာမူ စာရင်း Updated (14.5.2011)
၂။ အက်ဆေး - ၂ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်) (၂ ပုဒ် ဒီဇိုင်းနာထံပို့ပေးပြီး)
၃။ ဆောင်းပါး - ၂၀ ပုဒ် (အယ်ဒီတာများဆီပို့ထားပါတယ်) (၁၇ ပုဒ် ဒီဇိုင်းနာထံပို့ပေးပြီး)
အနော့်ကိုဘာခိုင်းလာမလဲလို့ စောင့်နေတာ..။ ဘယ်တွေလုပ်လို့ ဘယ်ထိပြီးကုန်ကြပြီ်လဲခင်ဗျ..။
အနော်တောက်တိုမယ်ရအလုပ်ကလွဲရင် အားနေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါပြီ ခင်ဗျ..။ အစ်တိုချစ်သီးဖုန်းနံပါတ်ကလည်း
အနော်မသိလို့ မဆက်ရဘူးခင်ဗျ..။ အနော်ဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲခင်ဗျ..။
ပို့စ် နံပါတ် #59 (http://myanmarengineer.org/forums/showthread.php?7391-(%E1%81%83)-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9&p=79992&viewfull=1#post79992) မှာ request လုပ်တောင်းဆိုထားတာရှိပါတယ်။
အဆင်ပြေရင် အဲ့ဒါလေးဖြစ်မြောက်အောင် ဖိုရမ်ထဲကပို့စ်တွေနဲ့ ကိုယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရောလို့ ဆောင်းပါးတပုဒ်အဖြစ် ရေးပေးပါလား။
လေပြေလေး တယောက်ကိုလဲ ဆက်သွယ်လို့မရဘူး။ တချက်တချက် ပျောက်သွားရင် အတော်ဖမ်းရခက်တယ်ဗျာ။
စာစောင်အတွက် ဘယ်လိုအခြေအနေ ရှိလဲ သိချင်လို့ .... ။ ၂၉.၅.၂၀၁၁ ထွက်ဖို့လျာထားတာ ဘာတွေလိုနေသေးလဲ မသိဘူး။ စိတ်ပူလို့ပါ။
နီးစပ်သူများ အကြောင်းကြားပေးကြပါအုံး ။
ကိုထင်လင်း ရော ဘာသတင်းရသေးလဲ မသိဘူး ။
ဒီနေ့ MEF နှစ်ပတ်လည်စာစောင်လေး ထုတ်ဝေဖို့ စီစဉ်လျာထားခဲ့ပေမယ့် ....
မထင်မှတ်တဲ့ အကြောင်းတခု ကြောင့် မထုတ်ဝေဖို့ အစဉ်သင့် မဖြစ်သေးတဲ့အတွက် မန်ဘာအားလုံး နဲ့ စာမူရှင်များကို ....
အားနာစွာနဲ့ လေးစားစွာ တောင်းပန်ပါရစေဗျာ ။
စာမူတွေ ကိုရွေးချယ်စိစစ် ထားပြီး ဒီဇိုင်းလုပ်လဲပြီးလုပြီးခင် ဖြစ်ပေမယ့် အချောသတ် ထုတ်ဝေမယ့် ရက်ကို ဒီဇိုင်းနာများကို မေးမြန်းပြီး ထပ်မံ ပြန်လည်အသိပေးပါ့မယ်။
နောက်ဆုံးအဆက်အသွယ်ရလို့ သူအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့
တစ်ခြားနည်းနဲ့ ၇အောင် လုပ်ကြတာပေ့ါ..
adobe indesign ရတဲ့သူများ ရှိရင်လည်း ပြောကြပါဥိး..
အစကနေပြန်လုပ်ရရင်တော့ မလွယ်ဘူးဗျို့ ..။ မောသဗျာ.....။
မောင်လေပြေလေး ရှပ်နီ Vs ရှပ်ဝါ အရေးတော်ပုံထဲမှာပဲ ပါသွားလေပြီလား.....?????
အလွယ်ကူဆုံး တခြားနည်းလမ်းလေးများ မရှိကြတော့ဘူးလား ။ :confuseds:
စာစောင် ၊ ဂျာနယ် ဒီဇိုင်းလုပ်ဖူးသူများ .... ၀ိုင်းဝန်းအကြံပေးကြပါအုံးဗျာ .... :noidea:
ကူညီနိုင်မယ့်သူများ ရှိရင်လဲ တိတ်တိတ်ကလေးမနေဘဲ ပြောကြအုံးနော် :help:
ဒီဇိုင်းက ကျနော်လည်း မလုပ်တတ်ဘူးဗျ ....
မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းနဲ့ တခြားပုံတွေက အရေးကြီးတယ်လေ
ဒါပေမဲ့ ဒီအတိုင်းနေလို့တော့လည်း မဖြစ်သေးဘူး ...
ဒီဇိုင်းလုပ်တတ်တဲ့သူများ ဒီမှာ အမြန်ဆက်သွယ်ပေးကြပါဗျာ ...
လုံးဝပေါ်မလာသေးဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော် လုပ်ကြည့်မယ်လေ.
ထင်လင်းက မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းနှင့် article တစ်ခုချင်း၊ poem တစ်ခုချင်းဆီရဲ့ သရုပ်ဖော်ပုံလေးတွေ ဆွဲပေးပေ့ါနော်..
တစ်ချို့ကတော့ category ခွဲပေးပေ့ါ. လောလောဆယ်တော့ ကျနော်ဆီ all articles ပို့ပေးပါ။
ကျနော် Adobe Indesign နှင့် လုပ်ဖို့များပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ကျနော်ဆီ all articles ပို့ပေးပါ။
ကျနော် Adobe Indesign နှင့် လုပ်ဖို့များပါတယ်။
ကျနော် အားလုံးပြန်ပို့ပေးပါ့မယ် ။
လေပြေလေးက အီးမေးကို မစစ်နိုင်တဲ့နေရာရောက်နေလားမသိဘူး ။
လုံးဝကို အဆက်အသွယ်မရတော့တာ ။
ကျနော် ဒီဇိုင်းနာတွေဆီပို့ထားတာလေးတွေကို forword လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီးမှ စာရင်းပြန်တိုက်ကြည့်တာပေါ့။
မျက်နှာဖုံး နှင့် back cover A4 size ကို ပို့ပေးပါဦး။ Design file ရောပဲ။ ပြီးတော့ ကိုချစ်သိးရေ pig ka lay (aye thar yar) ရဲ့ word document ရှိရင် ပို့ပေးဗျာ။
pdf နဲ့က Book ပြန်လုပ်တာကျတော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ကာတွန်း အရမ်းနည်းနေပါတယ်။ ဆွဲတတ်တဲ့သူများ ဆွဲပေးကြပါဦးလား။ မဆွဲတတ်ရင်တောင် အိုင်ဒီယာထုတ်ပြီး ဆွဲတတ်တဲ့သူကို အကူအညီတောင်းဆွဲပေးကြပါလားဗျာ.....
ကိုချစ်သိးရေ pig ka lay (aye thar yar) ရဲ့ word document ရှိရင် ပို့ပေးဗျာ။
ပြန်ပို့ထားပါတယ် ကိုရေခါးရေ ......
MEF လှုပ်ရှားမှု 2011 သတင်းဓါတ်ပုံလေးတွေကို ... JPEG နဲ့ပြန်လည်ပို့ပေးပါ့မယ်။ (ခဏတော့စောင့်ပါ)
၁။ မဂ္ဂဇင်း နာမည်လေး အတည်ပြုပေးစေချင်သည်။ မျက်နှာဖုံး နှင့် Header တို့ တွင်ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
၂။ ဆွဲဖို့ လိုတဲ့စာမူများ ကျန်ခဲ့ပါက ကျနော့်ဆီအကြောင်းကြားပါရန်။
၃။ ဥယျောဇဉ်နဲ့ မျက်နှာဖုံးပုံများ ပို့ ပေးပါမည်။ စောင့်ပေးပါရန်။
၄။ လိုတဲ့ ဒီဇိုင်းများ ပြောပါရန်။
--- စာစီစာရိုက်အတွက် လူများများလိုလျှင် မန်ဘာများ၏ အကူအညီယူသင့်သည်။
--- ဟိုးတလောက မောင်လေပြေလေး နဲ့ ဂျီတော့ မှာ တွေ့တော့ ...သူ့ ယောက္ခမကြီး ဆေးရုံတင်ထားလို့ အလုပ်များနေကြောင်းပြောပါသည်။
. M E F
3rd Aniversary Journal
လို့သာ ပေးလိုက်တော့နော်. http://myanmarengineer.org/forums/showthread.php?7429-%283%29-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%B9... မှာ ဆွေးနွေးထားသလိုပေ့ါ.
အစ်ကို့ဆီက jounal master page က ဒီလိုလာတယ်
just for your refrence.
စာရိုက်ဖို့လိုရင် ကျွန်တော့်ကိုပေးလို့ရပါတယ်..... စာတွေများနေရင်ကူရိုက်ပေးမယ့်သူတွေလည်းရှိတယ်...... ရိုက်စရာရှိရင် မေးလ်ထဲပို့ထားပေးလိုက်ပါ...... အချိန်မီပြီးအောင်ရိုက်ပြီး ပြန်ပို့ပေးပါ့မယ်..... မနက်ဖြန်လောက်ပို့ထားပေးရင်တော့ အဆင်အပြေဆုံးပါပဲ..... နောက်ရက်တွေကျတော့ အလုပ်ရှိနေရင် အပြင်မထွက်ဖြစ်လို့......
ကိုရေခါးရေ ..... စာမူတွေ အားလုံးနီးပါး အတွက် သရုပ်ဖော်ပုံတွေကို admin, လေပြေလေး,ကိုချစ်တီး တို့ ဆီကို ကျနော်လက်ကမ်းပို့ ပေးထားပါတယ်။
ကာတွန်းတွေလဲ ပို့ ထားပါတယ်။
yeakharr@myanmarengineer.org ကို ကျနော် forward ပြန်လုပ်ပေးထားတယ်။ ရမရ အကြောင်းပြန်ပါအုံး။ အက်ဒမင် ဆီကဖြစ်ဖြစ် ၊ကိုချစ် ဆီကဖြစ်ဖြစ်တောင်းလို့ လဲရကောင်းရပါမယ်။
လိုတာရှိရင် မေးလ်ပို့ ပါအုံး။
ကိုရေခါးရေ .. . မဂ္ဂဇင်း အဖုံး ရှေ့ +နောက် လေးလုပ်ဖို့ဘယ်လို ပုံလုပ်စေချင်လဲ၊ စာစောင်နာမည်လေးရယ်၊ ဘာဆောင်ပုဒ်တွေ စာတန်းတွေထည့်မှာလဲ ဆိုတာလေး ရယ် ၊ တခြားဘာလိုလဲ ဆိုတာလေးရယ် ပြောပေးပါအုံး။
ဥယျောဇဉ် အတွက် ပုံနဲ့ စာနဲ့ ကျနော်ပို့ ပေးလိုက်ပါပြီ။
ကြားထဲမှာ ညှပ်ထည့်ဖို့တိုလီထွာလီ လေးတွေကို ကိုဝီလျံပေါလ် အချိန်ရရင်ရှာပြီး ကိုရေခါး ဆီပို့ ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။
အစ်ကိုတို့ ရေး..............ဖိုရမ်မဂ္ဂဇင် တာဝန်မယူနိုင်ပေမဲ့
ရှေ့နောက်က လိုဂိုရယ် လင့်ရယ် ဂျာနယ်နာမည်ပါပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးဆို ရပါပြီ။ ပို့လိုက်တဲ့ဖိုင်တွေတော့ ဒေါင်းလုဒ်ချပြီး စလုပ်နေပါပြီ။ ကျေးဇူးပဲညီလေး
“ မျှော်သူမောပြီ အရိပ်ပမာခိုမှီ သည်ဘ၀ခရီးတစ်လျှောက်
ညည်းညည်းငယ်မငြူစူ” ...... :lalala:
ဖတ်ချင်တော့လဲ မနေနိုင်လို့ ဝင်ရောက်လောဆော်လိုက်ပါ၏ ;)
ကျွန်တော်လည်းပါပါမယ် စာစစ်တဲ့နေရာ စာရိုက်ရမယ်နေရာတွေမှာ အားမနာတမ်းပြောပါ... စာမူလည်း ပို့ပေးပါမယ်... အဆင်ပြေရင်တော့ ရွေးပေးကျပါနော်. ဟီး....။ ကျန်တဲ့ ခိုင်းချင်တာရှိရင်လဲ ပြောပါတတ်နိုင်ရင်အကုန်ကူညီပါမယ်.ဗျာ... ကျွန်တော် မေလ်းကတော့ kyawzinhtun.88@gmail.com , 1.hninsat@gmail.com ပါ
ထွက်ခါနီးပြီလားဗျို့...။
ဘာတွေများ လုပ်ပေးစရာကျန်နေသေးတုန်း...။ ရှိသေးရင်ပြောပါအုံးဗျို့ ..။
ကိုရေခါး ရေ ..... ဘယ်ပျောက်နေပြီတုန်းဗျ ....။
မျှော်နေသူ ရင်မှာ မော .....ဟော ဟော :snow:
ဟုတ်တယ်ဗျို့...... ကျွန်တော်တို့လည်း မျှော်နေပါတယ်..... တစ်ပါတ်တစ်ပါတ် ဒေါင်းလုပ် ချရကောင်းနိုးနိုးနဲ့ ချောင်းနေရတာ
တကယ်လုပ်နေတဲ့သူတော့ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းနေလဲမသိဘူး....... အားအားယားယားသမားတွေက ခိုးလိုးခုလုနဲ့ :P
စာမလာ သတင်းမကြား မို့လို့ပါဗျာ..... နီးစပ်ရာသူများ သွားရောက်ကူညီခြင်း..... ပြီးစီးမှုအခြေအနေအား မေးမြန်း၍ အကြောင်းပြန်ခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း.....
အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်...... တိုက်တွန်းရတာ ဘာပင်ပန်းတာကျလို့ ဟဲဟဲ
ကိုရေခါး လည်းအိမ်ပြောင်းတာနဲ့ အလုပ်နည်းနည်းများနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဟိုတလောက အွန်လိုင်း ကိုတကူးတကလာပြီး ပြောသွားတာပါ။ ဂျာနယ် အတွက်လည်း လုပ်နေပါတယ် ခဏစောင့်ပေးဖို့ပြောသွားပါတယ်။
ကဲ..ရင်ခုန်စွာနဲ့ ပဲ စောင့်မျှော်ကြတာပေါ့နော်။း)
(ဟဲဟဲ ဘာတွေညာတွေမသိဘူးနော်..... ခံစားချက်သက်သက်ကိုပြောတာ :P)
မျှော်သူမောနေကြတာကိုတော့အားနာပါရဲ့ဗျာ.. ကျနော်လုပ်တောတော့ တစ်ဝက်လောက်ထိမှာ ဆက်လုပ်ဖို့ အချိန်မရတာနဲ့..
ထင်လင်းက ဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။။ သူလုပ်ရင်တော့ ဒီဇိုင်းလှတိာကို မြင်ရမှာပါ။
ဒီတော့ နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းပြီး ထပ်စောင့်ကြပါစို့....
တော်တော်များများတော့ ပြီးသွားပါပြီ... စာမျက်နှာ (၁၂၀) လောက်တော့ ရောက်နေပြီ။ နဲနဲတော့ ကျန်သေးတယ်..။. PDF ပြောင်းဖို့ စမ်းကြည့်တော့ Error တက်လာတယ်..။ Microsoft Publisher ကနေ Adobe Acrobat9နဲ့ ပြောင်းတာ။
Acrobat9ရဲ့ Serial Number လေးလည်း လိုချင်တယ်..။
တခြား ဘာဆော့ဖ်ဝဲ သုံးရင်ကောင်းသလဲ???
Adobe CS4 Master Collection ရဲ့ ခရက်ဖိုင်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်...
ပက်ဝပ်ကတော့ အမ်အီးဖက်ဖ် အကြီးသုံးလုံးဆက်တိုက်ပါ....
အဲဒီအထဲမှာ manual လဲပါပါတယ်... ကီးဂျန်ကို မသုံးခင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး...
တခြားသုံးဖူးတဲ့ PDF ပြောင်းတဲ့ဆော့ဝဲကတော့ PDF955 (http://www.pdf995.com/) ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ....
နောက်ထပ်ကီးဖိုင်တွေ့လို့ attached လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်....
ကိုထင်လင်းရေ... ကီးအဆင်ပြေလား မပြေလား စမ်းကြည့်ပြီရင် ပြောပါဦး...အဆင်မပြေရင်ထပ်ရှာရအောင်လို့ပါ...
ဒီနှစ် အတွင်းပိုင်း လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေ ထည့်ချင်ပါသေးတယ်..။ မှတ်တမ်းပုံလေးများ ရှိခဲ့ရင် Microsoft word နဲ့ စာကလေး စီပြီး ကျနော့်ဆီပို့ ပေးပါရန်....။
သူငယ်ချင်းထင်လင်းရေ..... လက်တိုလက်တောင်းလုပ်ပေးစရာရှိရင် လက်တို့လိုက်ပါ..... လိုလိုလားလားလုပ်ပေးပါ့မယ်.... လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြောတာပါ..... :P
(ဆြာပေါ ရေ ... ငါ စာပို့ ထားတယ်နော်...)
မဂ္ဂဇင်းဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ထဲမှာ ပါတဲ့လူနာမည်စာရင်းလေးလိုချင်တယ်..။
စာမူတွေကိုခွဲပြီး တည်းဖြတ်စစ်ဆေးပေးတဲ့ အယ်ဒီတာများ နာမည်...
ဒါက နဂိုစာရင်းပါ ... Final ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကိုချစ်သီး confirm လုပ်ပေးပါ ...
ကျနော့်ဆီ PDF မလုပ်ခင် ကျနော့်ဆီ source file အရင်ပို့ပေးပါ ကိုထင်လင်းရေ Final Proof ကြည့်ချင်လို့ပါ ....
Journal ပြီးစီးမှုအခြေအနေ 80% ရှိနေပါပြီ။
အဆာပလာ လေးများ၊ လွတ်နေသော နေရာများ ကို ဖြည့်တဲ့အပိုင်းရောက်နေပါတယ်။ William Paul ရှာဖွေပေးတဲ့ တိုလီမုတ်စလေးတွေကို ဖြည့်စွက်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။
ပြဿနာ တစ်ခုကတော့ PDF ပြောင်းတဲ့နေရာပါပဲ။ Publisher ကနေ Adobe Reader9နဲ့ ပြောင်းတဲ့နေရာမှာ ... ဇော်ဂျီဖောင့်တွေက'အ' ကနေ 'A' ...'ဥ' 'U' တွေ အကုန်ပြောင်းကုန်လို့ဂွကျနေပါတယ်။
Adobe reader9ကလဲ Serial No မဖြည့်ရသေးတော့ Expire ဖြစ်တော့မယ်..။( ကိုချင်းတွင်းသား ပေးလိုက်တဲ့ကီးက အလုပ်မလုပ်ပါ..မှားနေကြောင်း ပြောပါသည။်)
ကျနော်လဲ အရင်က ခဏခဏဖြစ်ဖူးတယ် ။
Nitro Prfessional လေးကို အင်စတောလုပ်ပြီး သူနဲ့ပြောင်းလိုက်တော့ အိုကေသွားတယ် ကိုထင်လင်းရေ ....
ဒီနေရာလေးမှာ (http://myanmarengineer.org/forums/showthread.php?5072-Nitro-PDF-Professional-6.0.2.6-Keygen&highlight=nitro+professional) ရှိတယ် စမ်းကြည့်လိုက်ပါလား။
ကျနော့်ဆီ PDF မလုပ်ခင် ကျနော့်ဆီ source file အရင်ပို့ပေးပါ ကိုထင်လင်းရေ Final Proof ကြည့်ချင်လို့ပါ ....
မှန်ပါတယ် အကိုရေ ....
ကိုထင်လင်းရေ .... ကိုဟယ်ရီဆီ Final Proof အတွက် pdf မပြောင်းခင်လေးပို့ပေးပါအုံး။ မျက်စိလျှန်းပြီး မတွေ့မိလိုက်မှာစိုးလို့ ထပ်မံ remind လုပ်တာပါ။
ပုံနဲ့ စာတွေပြန်စီခြင်းပြီးနေတာကြာပြီ။ အရင် တစ်ပတ်ကတည်းကပဲ။ PDF ပြောင်းတဲ့နေရာမှာ ပျားတုပ်နေတာဗျ..။
ကို ချင်းတွင်းသား ပြောတဲ့ Nitro က တောင်ငူမှာ မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်..။ Weather လည်းဆိုးတာနဲ့မြို့ ထဲကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ လာဖို့ ရာက အဆင်မပြေလို့ကနေ့ မှ လာပြီး ဆိုင်မှာရှိတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ တွေ တော့ဝယ်လာခဲ့ပြီ။
ကျနော် ရလိုရငြား ထပ်တော့လုပ်ကြည့်ပါအုံးမယ်။ မောလာပြီဗျာ... ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးကျမှ လာပြီး တစ်လစ် လစ်လစ် နဲ့ ဖြစ်နေတယ်...။
ကို ချင်းတွင်းသား ပြောတဲ့ Nitro က တောင်ငူမှာ မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်..။
Nitro PDF pro ... link ကို ဒီနေရာလေးမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forums/showthread.php?7883-Pdf-%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC-%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%95-software-%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%AB&p=83418#post83418) ပြောပြဖူးတယ် ကိုထင်လင်း ရေ....
upload တင်လို့ အဆင်ပြေရင် တင်ပြီးလင့်ပို့ပေးလေ ... ကျနော် ကြိုစားပြီးတော့ PDF ပြောင်းကြည့်ပေးမယ် ...
အောက်ကပို့စ်မှာ PDF မပြောင်းခင်လေး ကိုဟယ်ရီက တချက်ကြည့်ချင်သေးတယ်လို့ ပြောထားသေးတယ် .... ပို့ပြီးသွားပြီလား မသိ ...
ဆြာထင်လင်းရေ.... အဆုံးသတ်နေပြီလို့တော့ကြားတယ်..... နောက်ဆုံးအခြေအနေလေးသတင်းထုတ်ပြန်ပေးပါဦး..... မျှော်လင့်ရမှာလား.... စောင့်စားရမှာလား.... :P ကူစရာပေါ်ရင်လည်း လူတကာကို အော်ပြီး ခေါ်လို့ရပါတယ်ဗျ......
လောလောဆယ် ကွန်နက်ယှင်မကောင်း၍ တင်၍မရပါ။ ကိုဟယ်ရီ ဆီကို ပို့ ဖို့ ရာ ... ဖိုင်ဆိုက်က (50)Mb ရှိနေပြီး မြို့ တောင်ငူရဲ့ အံ့ချီးဖွယ်ရာ ကွန်နက်ယှင် အခြေအနေကြောင့် စိတ်ထင်တိုင်းမပေါက် သဖြင့် ဂေါက်ချင်သလိုလိုတောင် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဒီအပတ် သောကြာနေ့ရန်ကုန်ကို ဆင်းပြီး သကာလ မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက် စပိ ဖြင့် စိတ်ရှိလက်ရှိ ကောက်တင်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
- ကိုဟယ်ရီဆီကို အကြမ်းထည် တော့ပို့ ထားပါသည်။ Publisher file နဲ့ စာစီထားတာကို တော့ ရန်ကုန်ရောက်မှ (စနေ နေ့လောက်ဖြစ်မည် ) ပို့ နိုင်ပါမည်။ (စိတ်မကောင်းပါ..:P)
- ကိုဟယ်ရီမှ အမြန်ဆုံးပြန်လည်မွမ်းမံပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ လောက်မှာ အပြီး Publish လုပ်စေချင်သည်။
- ကျနော် ရန်ကုန်မှာရှိတုန်း အင်တာနက် ဂျာနယ် လိုမျိုး ဂျာနယ် တစ်စောင်စောင်ကနေ ဖိုရမ်မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေကြောင်း ကြော်ငြာကလေးကို ထည့်ရန် ကြိုးစားကြည့်ချင်ပါသည်။
- နောက် တစ်ခုအကြုံပြုချင်တာက ကိုယ့်နယ် အလိုက် GTC ကျောင်းများသို့မဂ္ဂဇင်း ကို CD များဖြင့် ကူးပြီး နိုင်သလောက်ဖြန့် ဝေကြရင် ကောင်းမလား လို့ ပြောချင်ပါသည်။ (အိတ်စိုက် လုပ်ရမှာနော့် ..အဟေးး)
ကျနော်က တော့ တောင်ငူ GTC မှာ လိုက်ပြီး ဖြန့် ဝေပေးပါမည်။
ဒါဆိုလည်း ကိစ္စ မရှိဘူး ကိုထင်လင်း ... မပို့နဲ့တော့ ... ဆက်သာလုပ်လိုက်တော့ .... အခု လုပ်ပြီးသမျှ ကြည့်တာတော့ စာလုံးပေါင်း အမှား ဘာညာ မရှိသလောက်ပါပဲ ... သေသေချာချာ တခေါက်လောက်ပြန်စစ်ပြီး ထုတ်သာ ထုတ်လိုက်ပါ ... ကျနော် ခရီးထွက်စရာရှိတော့ အွန်လိုင်း လာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး.... သုံးပတ်လောက်ကြာမယ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် နှစ်ပတ်လည်စာစောင် အမှတ်(၃)
(လောလောဆယ် ကျနော် အဆင်ပြေတဲ့ လင့်နဲ့ ပဲ တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ပြန်ပြီး ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ကြပါ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြန့် ကြာနေခဲ့ရတာကို တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျား။)
အခုမှပဲ သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်ဗျာ ....:)
11-09-2011, 11:52 PM
အပြင်အဆင်ကတော့ top quality ဘဲ။ ကျေးဇူးပါ။
ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုရင်း ...
ဒေါင်းလုပ်လင့်ပေါင်းများစွာနဲ့ ဒီနေရာလေးမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forums/showthread.php?7929-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%82%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%B9-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%B9-(%E1%81%83)) ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ တစ်ယောက်ယောက် လောက် ကျနော်တို့ ဂျာနယ် ထုတ်ဝေကြောင်း သတင်းအတိုလေးနဲ့မျက်နှာဖုံးပုံလေးတွဲလျက်လေးကို ထည့်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဗျ..။
လောလောဆယ်တော့ Face book က Net Guide Journal နဲ့Internet Journal ကိုတော့ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေကြောင်းသတင်းထည့်ပေးနိုင်ဖို့ ရာ အီးမေးလ်ပို့ ထားပါတယ်။
ထည့်မထည့်တော့ ကျနော်လဲ မသိသေးပါဘူး။
------------------------------------------------------ --------------- -------------- --------------- -------------- -
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် www.myanmarengineer.org ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်စာစောင် အမှတ်(၃) ထွက်နေပါပြီ။ အပြင်အဆင် ကောင်းကောင်း Quality ကောင်းကောင်းနဲ့နည်းပညာ အသားပေးထားတဲ့ ပဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ကို 21st May ,2008 ရက်နေ့ မှာ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
နည်းပညာပိုင်း၊အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာများကို အဓိကဇောင်းပေးထားတဲ့ ၀က်ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာနဲ့ကဏ္ဍမျိုးစုံ၊ Subject မျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးချက်များစွာကို ဖတ်ရှု ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖျဉ်းတစ်ခေါက် ဖတ်လိုက်ပြီးပြီ..။ မိုက်တယ်ဟေ့..။ ကောင်းတယ်..။ quality လည်းတော်တော်ကောင်းတာပဲ..။ ကာတွန်းတွေ တော်တော်ကောင်းတယ်..။ အော်ပီကျယ်နီးပါးပဲ...။ အဟတ်..။
အစ်ကိုထွန်းကိုတောင် ဖုန်းဆက်ပြီးပြောဖြစ်သေးတယ်..။ ကြိုက်တယ်..။ နောက်နှစ်တော့ ဂျာနယ်မှာစာတစ်ပုဒ်တော့ ပါအောင်ရေးမယ်လို့
အားခဲထားတယ်..။ အဟမ်း အဟမ်း..။
ပရင့်ထုတ်ဖတ်မယ်ကွယ်..။ ဒီတိုင်းဖတ်ရတာ အားမရဘူး..။
နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ဂျာနယ်တိုက်မှ ဆြာထင်ထံသို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်လာခဲ့ကြောင်း.... ဆြာထင်ထံမှဖိုရမ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များထပ်မံ တောင်းခံသွားကြောင်း..... အဆိုပါဂျာနယ်တိုက်မှ ပုဂ္ဂိုလ်အား ဖိုရမ်စာမျက်နှာသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း.... ဆြာထင်မှ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလာသဖြင့် သိရှိခဲ့ရပါတယ်..... မည်သည့်ဂျာနယ်တိုက်မှဖြစ်သည်ကိုတော့ ကျွန်ုပ်၏ စေ့စပ်သေချာစွာ မှတ်သားနိုင်မှုကြောင့် (ဝမ်းသာလုံးဆို့နေ၍လည်း ဖြစ်နိုင်သည်) တိကျစွာဖ်ာပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါခင်ဗျား.... ဆြာထင်မှ မကြာမီရှင်းလင်းပြောဆိုမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်...
မနေ့ က အင်တာနက်ဂျာနယ်က သတင်းထောက် တစ်ယောက် ကျနော့်ဆီကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်ပြီး ဖိုရမ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေ မေးသွားပါတယ်။
စာစောင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေလဲ မေးသွားပါတယ်။ စာစောင်ကို ဒေါင်းလုပ် ဆွဲဖို့လင့်တွေ ကျနော် ပေးထားပါတယ်။
ဖိုရမ် တည်ထောင်တဲ့ နေ့စွဲ ၊ရည်ရွယ်ချက် စတာလေးတွေကို ကျနော် အတိုချုံး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
စာစောင်ကိုတော့ ဒေါင်းလုပ်ယူပြီး ဖတ်ကြည့်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Monday မှာ အင်တာနက်ဂျာနယ် ထွက်ပါမယ်။ ကျနော်တို့ စာစောင် နဲ့ ဖိုရမ်အကြောင်းသတင်း ပါ/ မပါကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲ။
ကျွန်တော်လဲ တတ်နိူင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီချင်ပါတယ်။
ခုလောလောဆယ်ကတော့ အလုပ်များနေတာကြောင့် နားလည်ပေးပါ။
အလုပ်အားတိုင်း ဖိုရမ်တော့ ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူး လောက်ပဲ အဆင်ပြေနေသေးတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ.......။
အဆင်ပြေရင်တတ်နိူင်တဲ့ ဘက်ကနေ ကူညီရန် အသင့်ပါလို့ သတင်းပို့ပါတယ်။
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်နှစ်ပတ်လည်ဂျာနယ် ဖွင့်လုို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကူညီကျပါဦး။ ကျနော် Mac Computers သုံးတယ်။ Could it be an issue with the case? I would greatly appreciate your help :)
Engineer လောင်းများကုို အားပေးဖုို့ရန်အတွက် ဒီ အချက်လေးကုို ရေးပေးလုိုက်ပါတယ်။
Lesson Summary + Money
Reason 1: Money.
This is always one of the top reasons to study anything. It's important to know that engineers are among the top-paid professions world-wide. It's well known that if you want money, engineering is one of the best ways to go. And since money is so important in our world, especially in these economic times, this is one factor you should be considering carefully.
Reason 2: Prestige
Along with doctors and lawyers, engineers are professionals who havealot of prestige. Wouldn't your mother be proud to tell all her relatives and friends that her son or daughter is an engineer? You'll gainadesired job image, and joinaprofession that supports national and global competitiveness, security, and rising living standards. Being an engineer just makes you look great!
Reason 3: Professionalism
Engineering programs worldwide are among the top, most-advanced educational programs. Study with top-of-the-line technology, receive great coop placements and training, and joinaprofession like no other. While working, you'll benefit from not only competitive wages and prestige- beingamember of an engineering society will give you access to information and technology that will help you do your work better and enjoy life. Engineering isaprofessional choice.
Reason 4: Flexibility and Choice
These days, everybody's looking for choice. Engineering offers so many choices you can haveahard time deciding on which one fits you- from electrical and mechanical to computer science or civil, the various areas of engineering are all exciting and in high demand. Engineering degrees open uparoad to flexible education- you can continue to earn an MBA, and move into other great careers. Engineering isagreat choice that opens up many paths for the future.
Reason 5: Intellectual Development
Engineering will help you grow and develop your ways of thinking. Becoming an engineer will force you to work on many transferable skills including problem-solving and critical reasoning. In addition you'll studyalarge variety of topics in school, including engineering courses but also sciences, and even some arts and languages. Knowing more and having more useful skills will develop you asaperson.
Reason 6: Entrepreneurship
Nobody wants to bealittle bolt inabig corporate machine. Studying engineering provides you with the knowledge and skills to open up your own business and become your own boss. Engineering training exposes you to businesses and gets you more familiar with things like finance and marketing, which is important for business purposes, and transferable skills will help you run your own company. Having technical knowledge will allow you to makeaproduct and centreabusiness around it
Reason 7: Challenge
Everyone likesagood challenge, since life would be boring otherwise. Engineering isachallenge. Throughout both your studies and your later career, you will be faced with problems which will require your creativity and logical analysis skills. Real world problems will be open ended with no wrong or right answer- it'll be up to you to findasolution and stand up to it, convincing others it's right. The engineering challenge is something to look forward to.
Reason 8: Creativity
Most jobs don't allow you to be creative. Engineering, on the other hand, lets you exercise your judgment however you want. You'll need to be creative to come up with solutions to fascinating problems, and you'll be able to use both concrete knowledge and your own thoughts and views when coming up withasuccessful original design or development. Engineering is the art of science!
Reason 9: Discovery
An engineering education will help you discover how the world works. You may be dealing with recent issues such as electric cars, alternative energy sources, nuclear reactors, and more. You may end up seeking for answers on how to solve world hunger or what kinds of technology cause cancer. Engineering is interconnected with science and research, and it will allow you to learn and discoveraworld of knowledge.
Reason 10: Society Needs You
If you're smart, you havearesponsibility to society. Don't waste your brain power- become an engineer. From the early days of dawn engineers have worked to benefit society- developing everything from necessary forms of safety and security measures and transportation mechanisms, to devices and technologies that enrich life and make it better and more comfortable for everyone. New engineering trends may help solve issues like diseases, hunger, energy, and pollution problems. Makeadifference- help us engineerabetter tomorrow.
နှစ်ပတ်လည်စာစောင် အမှတ်စဉ် (၄) ရဲ့ ဒေါင်းလုပ်လင့်လေးတွေကို အောက်ကနေရာတွေမှ ရယူနိုင်ပါသည်။
1) Download from ချင်းတွင်းသား's dropbox (http://www.myanmarengineer.org/forums/showthread.php?1742-%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%B9-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9-%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8&p=88941&viewfull=1#post88941)
2) Download from ko htin lin's multiupload links (http://www.myanmarengineer.org/forums/showthread.php?1742-%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%B9-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9-%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8&p=88935&viewfull=1#post88935)
3) from FB MEF pgae (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4898518136482&set=o.173470176081350&type=1)
အမှတ်စဉ် (၁) (၂) (၃) တို့အား အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရန်/downloadချရန် ... အောက်ကလင့်တွေမှာ ကြည့်နိုင်ပါသည်။
"အွန်လိုင်းမှ ဖတ်ရန် MEF နှစ်ပတ်လည် စာစောင်များ"
အမှတ် (၁) ==> http://www.scribd.com/doc/73180082/Myanmar-Engineer-Forum-Journal-2009-No-1
အမှတ် (၂) ==> http://www.scribd.com/doc/73183993/Myanmar-Engineer-Forum-Journal-2010-No-2
အမှတ် (၃) ==> http://www.scribd.com/doc/72242268/Myanmar-Engineer-Forum-Journal-2011